ဟန်းဂုရွာ: September 2010
SBS TV က ထုတ်လွှင့်ပြသသွားတဲ့ Lazy Club ဂီတပွဲ
SBS TV ကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသသွားတဲ့ Lazy Club Live in korea ဂီတပွဲ အကြောင်းလေးကို ကူးယူ တည်းဖြတ်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by ကိုလူချစ်(ကိုရီးယား) at 4:13 AM0comments
Labels: မျှဝေခြင်း, ဖျော်ဖြေရေး
၂၀၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည့် ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပူချွန်းမြို့ ဆော့ဂွမ်ဆာ ဘုရားကျောင်းတော် အတွင်း ကိန်းဝပ်တော်မူသော တိလောကမုနိ ရုပ်ပွားတော်မြတ်၏ ၁၂ ကြိမ်မြောက် ဗုဒ္ဓပူဇနိယ ပွဲတော် ကျင်းပရာတွင် ကူညီပေးကြသည့်
- ဆရာတော် လင်ယောင်ဒမ်နှင့် ဆော့ဂွမ်ဆာကျောင်းတိုက် တာဝန်ရှိသူများ
- ပူချွန်း နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားရိပ်သာမှ ရုံးအဖွဲ့ဝင်များ
ပူးပေါင်း ပါဝင်၍ စတုဒိယာ ကျွေးမွေးကြသည့်-
၁) ကောက်ညင်းပေါင်း-အာပြဲခြောက်ကြော် အလှူရှင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လွတ်မြောက်နယ်မြေ ကိုရီးယား
၂) ထမနဲ အလှူရှင် ကင်ပိုလူငယ်များအဖွဲ့
၃) ရွှေရင်အေး အလှူရှင် ဂွမ်ဂျူး မြန်မာအသင်း
၄) ဘူးသီးကြော် အလှူရှင် ဖျောင်ထက်မြို့မှ ကိုဦးနှင့် သူငယ်ချင်းများ
၅) ကျောက်ကျော အလှူရှင် ဓမ္မဒူတဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း (ကိုရီးယား)
၆) အအေးစုံ အလှူရှင် မြန်မာ့ဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် (ကိုရီးယား)
၇) ၀က်သားတုတ်ထိုးနှင့် အအေး အလှူရှင် အဖြူရောင်မေတ္တာလူငယ်များ
၈) ဆမူဆာ အလှူရှင် ကိုတင်ယဉ်နှင့် သူငယ်ချင်းများ
၉) သွားတိုက်တံ အလှူရှင် ကိုသက်မင်းအောင် + မမြသဲဖြူ
တိလောကမုနိ ရုပ်ပွားတော် အတွက်
- ရွှေသင်္ကန်း မ,တည်အလှူရှင် အန်ဆန်းမြို့မှ ကိုအောင်ဝေဖြိုး (ကရင်ကြီး) + ကိုအောင်မင်း
- အရုဏ် သစ်သီးဆွမ်း ပန်း အလှူရှင် ဒေါ်အေးအေးမြင့်, စိုင်းမောက်ခေးခမ်း, မနှင်းယုလှိုင်, မပိုးပိုး
ဧည့်ခံဖျော်ဖြေရေး အတွက် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးသော
- ရိန်းဘိုးတေးဂီတအဖွဲ့နှင့် အဆိုရှင်များ
- မှုံရွှေရည် အငြိမ့်အဖွဲ့မှ ညီအကို မောင်နှမများ
- မျိုးချစ်မောင် ဒိုးအဖွဲ့မှ ညီအကိုများ
- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီပေးကြသော ညီအကိုများ
မိုးထဲလေထဲ ကြွရောက် အားပေး လှူဒါန်း ကူညီကြသော ဧည့်ပရိသတ်များ အားလုံးကို လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
Posted by မောင်ကောက်ရိုး at 6:49 PM0comments
နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများနှင့် အတူဆင်နွဲသည့် ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်(ဘူဆန်း)
ဓါတ်ပုံများအား birdgyi1 (ကိုမင်းဟန်) မှ ပေးပို့ပါသည်။
Posted by ရဲနိုင်ဝင်း(ရွှေကျွန်း) at 12:20 AM0comments
Labels: Multimedia, မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ, မျှဝေခြင်း, လူမှုရေး
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ချူဆော့ ပိတ်ရက်အတွင်း မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော်၌
ကျင်းပခဲ့ သော အလှူတော် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများဖြစ်ပါသည်။ ဝေနေယျ သတ္တ၀ါ
အပေါင်း သာဓုအနုမောဓနာ ခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေ.......။
Posted by မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် at 8:24 PM0comments
Labels: ဘာသာရေး, မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ, သာဓုအနုမောဒနာ
တောင်ကိုရီးယားမှ ထုတ်လုပ်ဖြန့် ချီမည့် “အကုန်ထ အုံကြွ” တေးသီချင်းစီဒီ
ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများ အတူတကွ ပူးပေါင်းပြီး စီစဉ်တင်ဆက်ထားသည့် အကုန်ထအုံကြွဟု အမည်ပေးထားတဲ့ ပြည်သူ့ရင်ဖွင့်သံတေးစု(၂) တေးသီချင်းစီဒီ ကို နအဖ စစ်အုပ်စုရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် လာမည့် အောက်တိုဘာလ (၃)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် စတင် ထုတ်ဝေဖြန့်ချီမည်ဟု စီစဉ်ထားကြောင်းသိရပါတယ် ။
ထိုတေးသီချင်းစီဒီထဲတွင် တချိန်ကနာမည်ကြီး လူကြိုက်များပြီး အများပါးစပ်ဖျားဝယ် ရေပန်းစားခဲ့သည် မြန်မာ့ခေတ်ဟောင်းတေးသီချင်းများဖြစ်သည့် သုံးပန်လှ ၊ရိုင်းတဲ့စင်ယော်၊ ဥုံဖွ၊ ရွှေသုန္ဒရီ၊ လည်လည်သွားမယ်၊ မမပုသိမ်သူ၊ ရောင်ပေစူး၊ ရန်ကုန်သူ၊ အစရှိသည့် တေးသီချင်း(၈)ပုဒ်ရဲ့ တေးသွားသံစဉ်နှင့်အလိုက်ကိုယူပြီး အထူးသဖြင့် နအဖ စစ်အုပ်စုရဲ့ ကလိမ်စေ့ငြမ်းဆင် လိမ်ညာလှည့်စားထားပြီး မကြာခင်လပိုင်းအတွင်းကျင်းပပြုလုပ်ရန် ပြင်ဆင်ထားသည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားကာ လှောင်ပြောင်သရော်ထားသည့် စာသားများဖြင့်ထည့်သွင်းကာ ပြန်လည်သီကုံး ထားပြီး တင်ပြသီဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းစာသားများကို ရဲနိုင်ဝင်း(ရွှေကျွန်း)မှ တကိုယ်တော်ပင်တိုင် ရေးသားသီကုံးထားပြီး ၊တေးသီချင်းများကို အာကြယ်၊ ၀င်းလှိုင်(နန်းတော်ရှေ့)နှင့် အာဗြဲ တို့က အထူးခံစားသီဆိုသရော်ထားကြပြီး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့တော်ရှိ Sound 21 စတူဒီယိုတွင် ခေတ်မီအသံဖမ်းစက်ကရိယာများဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အသံသွင်း ဖမ်းယူထားကြောင်းသိရပါတယ်။
တေးရေးဆရာ ရဲနိုင်ဝင်း(ရွှေကျွန်း)နှင့် အဆိုရှင်များဖြစ်ကြသည့် အာကြယ် နှင့် အာဗြဲ တို့အတွဲဟာ လွန်ခဲ့သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကလည်း ခြစားယို့ယွင်း မြန်မာ့ရှု့ခင်း လို့အမည်ရှိတဲ့ ပြည်သူ့ရင်ဖွင့်သံတေးစု(၁)ကို စတင်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့ပြီး နအဖစစ်အုပ်စုကိုအကွက်ကျကျအချက်ကျကျဖြင့် လှောင်ပြောင်သရော်ထားသည့် သူတို့ရဲ့တေးသီချင်းများသည် ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွင်းမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားရေပန်းစားခဲ့သည့် တေးသီချင်းများအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်သူများဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊
ယခုတကြိမ် အကုန်ထအုံကြွ ပြည်သူ့ရင်ဖွင့်သံ တေးစု(၂)အား စီဒီတစ်ချပ်လျှင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာ ကိုရီးယားဝမ်(၅၀၀၀)နှုန်းဖြင့် ဖြန်ချီရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအနှံအပြားမှာ ရောက်ရှိနေထိုင်နေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများမှ အလိုရှိလျင် စီဒီတချပ်လျင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၅)ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပေးပို့ရမည့် နိုင်ငံအလိုက်စာတိုက်ပို့ခကြေးကို ထည့်ပေါင်းပေးဆောင်ရမည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိလာမည့် အကျိုးအမြတ်အားလုံးကို မြန်မာပြည်တွင်းရှိ မြန်မာပြည်သူများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နေသည့် လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများအား ပေးပို့လှုဒါန်းကူညီသွားမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများအနေဖြင့် ၀ယ်ယူအားပေးခြင်းဖြင့် အတူတကွ ကုသိုလ်ပါဝင်ကြပါရန်လည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မျိုးချစ်မြန်မာတွေစီစဉ်တာဆိုရင် သူများတွေနဲ့မတူ တမူ ထူးခြားတတ်တာမို့ ကမ္ဘာအနှံအပြားက မြန်မာတို့အနေနဲ့ ယခု အကုန်ထ အုံကြွ လို့အမည်ပေးထားသည့် တေးသီချင်းစီဒီကို အမြဲ တမ်းနားဆင်ဖို့နှင့် အမှတ်တရ သိမ်းဆည်းထားဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုရန်နိုင်ထွန်း(ဖုံးနံပါတ်+၈၂+၁၀-၈၇၂၃-၄၇၇၃)ကို အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး
အီးမေလ်းအနေနဲ့ဆိုရင် yannainghtunkorea@gmail.com ကို စာရေးမှာကြားနိုင်သလို
အကုန်ထအုံကြွ ပြည်သူ့ရင်ဖွင့်သံ တေးစုနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် သိရှိလိုသူများ အနေဖြင့် တေးရေးဆရာ ရဲနိုင်ဝင်း(ရွှေကျွှန်း) (ဖုံးနံပါတ်+၈၂+၁၀-၄၇၉၉-၄၃၂၂)နှင့် တေးသံရှင် ၀င်းလှိုင်(နန်းတော်ရှေ့) (ဖုံးနံပါတ်+၈၂+၁၀-၅၁၈၀-၂၂၀၈) တို့ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Posted by ကိုလူချစ်(ကိုရီးယား) at 12:24 PM0comments
Labels: အထေ့အငေါ့, ဖျော်ဖြေရေး, မောင်းသတင်း
အားကစား စုံညီ ပွဲတော် ဖိတ်ကြားခြင်း
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဂျိုဂေးဆာမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ရှစ်နိုင်ငံ အားကစားစုံညီ ပွဲတော် ဖိတ်ကြားခြင်း
ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ ရွှေမြန်မာ ညီအစ်ကို အပေါင်းတို့ ခင်ဗျား
လာမည်. (2010-10-10) တနင်္ဂနွေနေ့တွင် (ဆိုးလ်မြို့၊ ဂွန်းဂျင်းဂူ၊ ဆိုဂျဲရှီဆောန်နွာယယ်ဆူလ်အထက်တန်းကျောင်း)အတွင်း၌ ရှစ်နိုင်ငံ အားကစားစုံညီပွဲတော် ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါ စုံညီပွဲတော်သို့ ပျော်ရွှင်စွာ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြစေရန် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်လိုသူများသည် မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြု ကျောင်းတော်သို့
အဆိုပါနေ့၌ ကျောင်းတော်မှ နံနက် (၈) နာရီတွင် အကြိုအပို. ကားများ ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပြီး ပါဝင်ယှဉ်နိုင်သည် အားကစားများမှာ
၃။ လွန်ဆွဲ ပြိုင်ပွဲ
၄။ လက်ဆင့်ကမ်း အပြေးပြိုင်ပွဲ ( မီတာ ၄၀၀ )
၅။ ၀ါးလုံးထိပ်တွင် ရှိသော ခြင်းလုံးထဲသို့ ဘောလုံးပစ်ထည့်သော အားကစားနည်းများ ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ( ၈ )နိုင်ငံ ပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသူများအား ဆုချီးမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး ကြွရောက်လာသော
ပရိတ်သတ် အပေါင်းကို လည်း လက်ဆောင်များ ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါနေ့တွင် သွားကျန်းမာရေး အတွက်အခမဲ့ ကြည့်ရှု့ကုသပေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ယှဉ်ပြိုင်မည့်နိုင်ငံများမှာ-မြန်မာ၊ သီရိလင်္ကာ၊ ကမ္ဘောဒီယား၊ နီပေါ၊ ဗီယက်နမ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ထိုင်း နိုင်ငံများ ဖြစ်ပါသည်။
စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ အမြန်ဆက်သွယ် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
Posted by မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် at 10:07 AM0comments
Labels: ဘာသာရေး, သတင်းဖတ်စာ, မောင်းသတင်း
သံဃာတော်များ ဦးဆောင်သည့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး သုံးနှစ်ပြည့်အဖြစ် ကာတွန်းဟန်လေးရဲ့ ဖန်တီးမှုကို ထပ်ဆင့်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
Posted by သူကြီး at 7:44 PM0comments
Labels: Multimedia, ဒီမိုလှုပ်ရှားမှု, ဘာသာရေး
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ရှိ ဗုဒ္ဓ ပရဟိတ ဆေးဆရာဝန်းများအသင်းမှာ မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာ
ပြုကျောင်းတော်၌ လာမည့် (၃ - ၁၀ -၂၀၁၀) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် ၁ နာရီမှ
ညနေ ၄ နာရီထိ ကိုရီးယားနိုင်ငံ ရှိ မြန်မာ လူမျိုးများအတွက် အထွေထွေ ရောဂါနှင့်
အပ်စိုက်၊ သွားခြစ်၊ မာဆက် အစရှိသည် တို့ ကို ကုသပေးမည် ဖြစ်ပါသော ကြောင့်
ဆေးကုသမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော်သို့ ကြွရောက်ကြပါရန်
Posted by မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် at 7:36 PM0comments
Labels: ကျန်းမာရေး, ဖိတ်စာ, အလုပ်သမား အထောက်အကူပြု အစီအစဉ်, မောင်းသတင်း
၁၂ ကြိမ်မြောက် တိလောကမုနိ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် ကို စက်တဘ်ာ ၂၂ ရက်နေ့က စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါပြီ ။ မိုးလေဝသ မကောင်းတဲ့ကြားက လာရောက် အားပေးခဲ့ကြတာပါ ။ တိလောကမုနိဗုဒ္ဓ ပူဇနိယပွဲတော်ကို နှစ်စဉ် ကျင်းပလာကြတာ ဆိုတော့ ဒီနှစ်ဟာ တိလောမုနိဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော်မြတ်ကို ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာတွေ ပင့်ဆောင်ပူဇော်လာတာ (၁၂) နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီပွဲတော်ကို အကြောင်းပြုပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရ နိုင်ငံတော် ရုံးပိတ်ရက်ရှည်ကာလမှာ ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာတွေ ပြန်လည်ဆုံစည်းကြရတဲ့ ပွဲတော်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီနှစ်ပွဲတော် စတာဒိသာ မဏ္ဍပ်များမှာ ထူးထူးခြားခြား ကျနော်သတိပြုမိတာတစ်ခုကတော့ ၊ အဖြူရောင်မေတ္တာလူငယ်များ(ကိုရီးယား) ။
စတုဒီသာ အလှူလုပ်ကြတယ် ။
မြန်မာ့ရိုးရာ တရုတ်ဝက်သားဒုတ်ထိုးကြွေးကြတယ် ။
အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းကြတယ် ။ ရောင်းရငွေကို ဧရာဝတီတိုင်း နာဂစ်ဒေသ တွဲဖက်မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုလှူကြမလို့တဲ့ ။
ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေမှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေကြတယ် ။
သီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်တိုင်ဆိုခဲ့ကြတယ် ။ ဆုတွေတောင်ရလိုက်သေး ။
မြန်မာအတော်များများ အခြားနည်းတွေနှင့် ပျော်ပါးနေကြတဲ့အချိန် ။
အခန်းအောင်းပြီး ပိုက်ဆံစုနေကြတဲ့အချိန် ။ လုပ်အားခ ၁၅ မိနစ်စာလောက် (ဝမ် ၂၀၀၀လောက်) ကို လှူဖို့ လက်တွန့်နေကြချိန်မှာ သူတို့ဟာ မွန်မြတ်တဲ့ အလှူတစ်ခုကို လှူဖို့လုပ်နေကြတယ် ။
နောက်ထပ်လည်း လှူဖို့ အစီအစဉ်တွေ ရှိသေးသတဲ့ ။
ဒီလူငယ်တွေ အကြောင်း စိတ်ဝင်စားလို့ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာကို ကျနော်ဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ် ။ အလှူရှင် အမည်များ နှင့် အသေးစိတ်အစီအစဉ်များကိုတွေ့ခဲ့ရတယ် ။ လှူခဲ့ကြတာတွေလည်း မနည်းတော့ဘူး ။ နောက်ထပ်လည်း လှူဖို့အစီအစဉ်တွေ ရှိသေးသတဲ့ ။
မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ် ။
သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖတ်ရှုမိရာက ကျနော်အတွေးတစ်စ ဝင်လာတယ် ။
ယနေ့ ကျနော်တို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြဿတွေ ။
ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ကွာဟမှုပြဿနာ ။
တကယ်ဆို ဓနဥစ္စာ ခွဲဝေမှုမညီမျှတဲ့ ပြဿနာ ။ ပညာပြဿနာ ။ အင်အားပြဿနာ ။
ဓနဥစ္စတွေ အပြိုင်ရှာနေကြတယ် ။ ဘယ်သူတေတေ ငတေမာရင်ပြီးရော့ပဲ ။
တစ်သီးပုဂ္ဂလအဆင့် ။ နောက်တစ်ဆင့်် ကုမ္ပဏီကြီးများ အုပ်စုဖွဲ့ ။ အဆင့်တက်လာ ၊ နိုင်ငံများအုပ်စုဖွဲ့ နိုင်ငံအကျိုးစီးပွါးခြင်း ယှဉ်ပြိုင် ။ လက်နက်အပြိုင်တပ်ဆင် ။ ဝါဒချင်းပြိုင် ။ ဝါဒမတူ တို့ရန်သူ ။ စစ်အင်အား ပြိုင် ။ နည်းပညာပြိုင် ။ ကုန်ပစ္စည်း အပြိုင်ထုတ် ။ လေထုညစ်ညမ်း ၊ ရေထုညစ်ညမ်း ။ ဓါတ်သတ္တု နှင့် သယံဇာတ ပစ္စည်းများ အပြိုင်ထုတ် ။ ဂေဟစနစ် (ecosystem) ပျက် ။ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန် ။ မုန်တိုင်း ၊ ရေကြီး ၊ အပူလှိုင်း ။ ဆင်းရဲသူများ ဆင်းရဲသည်ထက် ဆင်းရဲ ။ ချမ်းသာသူများ ချမ်းသာသည်ထက်ချမ်းသာ ။
ယနေ့ကမ္ဘာမှာ လူသားသန်းတစ်ထောင် ဆင်းရဲတွင်းနက်နေသတဲ့ ။
အမေရိကန်တို့ အီရတ်ကို ဆင်နွှဲတဲ့ စစ်ပွဲအတွက် ဒေါ်လာ ၁၃၄ ဘီလီယံ ကုန်ခဲ့ပြီး၊ ယခုအထိ အီရတ်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ တစ်ရက်လျှင် နှစ်ဘီလီယံ သုံးနေသတဲ့ ။ (တစ်ဘီလီယံဟာ သန်းတစ်ထောင် ပါ ။)
အက်ဖ် - ၁၁၇ ဗုံးကြဲတိုက်လေယာဉ်တစ်စီးရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာ ၄၅-သန်း
လေယာဉ်တင်စစ်သင်္ဘောကြီးတစ်စီးရဲ့ တန်ဖိုးက ၄.၅ ဘီလီယံ၊
အပါချီရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာ ၄-သန်း၊
အဘရမ်းတင့်ကားတစ်စီးရဲ့ တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ ၄.၃ သန်း ။
ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေက အဲဒီလက်နက်တွေကို အပြိုင်အဆိုင် တပ်ဆင်နေချိန်မှာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်နေသူ သန်း ၁၀၀၀ ရှိနေပြီး ၊ အဲဒီ ဆင်းရဲသားတွေဟာ တစ်ဦးလျှင် ဒေါ်လာ ၅၀-ရရင် အသက်ရှင် နိုင်သတဲ့ ။
လာမယ့် ၁၅-နှစ်အတွင်း ဆင်းရဲသူတွေကို ထောက်ပံ့ဖို့ဒေါ်လာဘီလီယံ ၆၀-ရှိရင် လုံလောက်ပြီး ၊ ငတ်နေသူ တစ်ယောက်ကို တစ်နှစ်လုံး အစားအစာကျွေးဖို့ ၃၂-ဒေါ်လာသာ လိုပါသတဲ့ ။ ကလေးတစ်ယောက် ကို ရောဂါမျိုးစုံ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ ၁၅-ဒေါ်လာသာ လိုပြီး ၊ နေအိမ်တစ်လုံး ဆောက်ပေးဖို့ ဒေါ်လာ ၅၀၀-သာလိုသတဲ့ ။ ကမ္ဘာ့လူသားတွေ ကောင်းမွန်တဲ့ သောက်သုံးရေရဖို့ တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၁၀-ဘီလီယံသာ လိုပါသတဲ့ ။
ငါးရာ ညီမျှခြင်း သန်းလေးရာ
ကမ္ဘာဟာ လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဆင်းရဲချမ်းသာကွာ ဟမှု (ဘယ်လောက်ကွာသဲဆိုရင်) အချမ်းသားဆုံး လူ ၅၀၀ ရဲ့ ဝင်ငွေဟာ အဆင်းရဲဆုံး လူသန်း ၄၀၀ (သန်း လေးရာ) ရဲ့ ဝင်ငွေလောက်ရှိတယ်တဲ့။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သူဌေးကြီး ဘီလ်ဂိတ်ဟာ ဒေါ်လာ ၅၆ ဘီလီယံ ချမ်း သာပြီး သူဌေးကြီးဘတ်ဖက်ကတော့ ဒေါ်လာ ၅၃ ဘီလီယံ ချမ်းသာသတဲ့ ။ အာရှိတိုက်မှာလည်း ဘီလီယံနာ (သန်းထောင်ချီ) သူဌေးကြီးတွေ တိုးနေပြီး ၊ စင်ကာပူမှာ ၄၀၊ အိန္ဒိယမှာ ၃၆ ယောက်၊ ဂျပန်မှာ ၂၄ ယောက်၊ ဟောင်ကောင်မှာ ၂၁ ယောက်၊ တရုတ်မှာ ၂၀ ရှိသတဲ့ ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ သန်းချီချမ်းသာတဲ့ မီလီယံနာကတော့ ၉.၅ သန်း ရှိတယ်ဆိုတာပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသန်း ၁၀၀၀ လောက်ဟာ တစ်နေ့ကို တစ်ဒေါ်လာလောက်ပဲ ဝင်ငွေရှိတယ် ။ (ဟဲ ၊ ဟဲ တစ်နေ့ကို ဝင်ငွေ တစ်ပြားမှ မရှိတဲ့ သူတွေရဲ့ စာရင်း မပါသေးဘူးထင်တာပဲဗျ။)
ရောဂါမျိုးစုံဖြစ်ပွားမှု ၊ တီဘီ အဆုတ်ရောဂါ၊ သွေးတိုး၊ ဆီးချိုသွေးချို၊ နှလုံး၊ ငှက်ဖျား၊ အေအိုင်ဒီ အက်စ်၊ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး အစရှိတာတွေ၊ အဆုတ်ရောဂါကြောင့် တစ်နေ့ကို လူပေါင်း လေးထောင့်လေးရာ သေနေရသတဲ့ ။ ဒီရောဂါပျောက်အောင် ကုဖို့တော့ လူတစ်ယောက်အတွက် ဒေါ်လာ ၂၀ သာလိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီငွေလောက်ကို မတတ်နိုင်ကြဘူး၊ ငှက်ဖျားကြောင့် တစ်နေ့ကို လူသုံးထောင် သေနေပြီး ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါကတော့ တစ်နေ့မှာ လူပေါင်း ၁၁၀၀၀ ကို ကူးစက်ပြီး တစ်ရက်ကို လူရှစ်ထောင် သေ စေသတဲ့ ။ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ်ဟောင်း ကိုဖီအာနန်က ဒီရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာပျက်နိုင်တယ်လို့ ပြောခဲ့သတဲ့။
အာရှတိုက်နိုင်ငံတွေကတော့ ဘာသာရေး၊ ဝါဒရေးတွေထက် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့၊ စီးပွား ဖြစ်ထွန်းဖို့ တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေဖို့ကိုပဲ ဦးတည်နေပါသတဲ့ ။ အာရှတိုက်ဟာ လူနေမှု အဆင့်အတန်းလည်းတိုးတက်နေပြီး ၊ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ ကမ္ဘာကို အမီလိုက်ဖို့ ပဲ အဓိကအားဖြင့် အားသန်ကြသတဲ့ ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ တရုတ်နိုင်ငံသို့ နှစ်စဉ်ကုန်တင်ပို့မှု တန်ဖိုး ဒေါ်လာ သန်း ၅ သောင်းသာ ရှိပြီး တရုတ်မှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ တင်ပို့မှုက နှစ်စဉ်သန်း ၂ သိန်း၊ ၅ သောင်းရှိပြီး ၊ ယနေ့ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများရဲ့ စီးပွားရေးမှာ တရုတ်ဟာ နံပါတ် ၆ နေရာမှာ ရှိသတဲ့ ။ ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်မှာ နံပါတ် ၃ နေရာကို ရောက်မယ် ဆိုပဲ ။ နောင်ခေတ်တွေမှာ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဟာ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ ဖြစ်လာကြမယ် တဲ့ ။ တရုတ်က လူဦးရေ သန်း ၁၃၀၀ ကျော်ရှိပြီး၊ အိန္ဒိယကတော့ သန်း ၁၁၀၀ ကျော် ။ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးသူ တစ်စက္ကန့်တစ်ယောက်နှုန်း တိုးနေပြီး ၊ တရုတ်မှာ ဆဲလ်ဖုန်းသုံးသူ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ကုန်မှာ သန်း ၆၀၀ ကျော်ရှိမယ် တဲ့ ။
စီးပွါးရေးတိုးနေသလို ညစ်ပတ်တာလည်း လွန်ရောပဲ
အဲဒီလို တစ်ဖက်က စီးပွားရေးတိုးတက်လို့ လူချမ်းသာတွေ တိုးတက်လာသလိုပဲ တစ်ဖက်မှာလည်း ဆင်းရဲသာတွေက တိုးနေတာပဲတဲ့ ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ သန်း ၂၀၀၊ တရုတ်နိုင်ငံမှာ သန်း ၆၀၀ ဟာ ဆင်းရဲတွင်း နက်နေသတဲ့ ။ တရုတ်ရဲ့ စီးပွားရေးနှစ်စဉ် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်နေသလိုပဲ ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုက ၈ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေတယ်။ ကမ္ဘာ့အညစ်ပေဆုံးမြို့ ၂၀ မြို့အနက် ၁၇ မြို့က တရုတ်ပြည်မှာ ရှိတယ်။
ယနေ့ မြို့ပြခေတ်ဟာ အပေါင်းလက္ခဏရှိသလို အနုတ်ပြတာတွေလည်း မနည်းဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတို့ရဲ့ သမိုင်းဟာ ဒီလိုပဲ အပေါင်းအနုတ်တွေ ပြည့်နှက်ခဲ့ရာမှ လူ့လောကဟာ ရှေ့ကို တိုးလာခဲ့တာပဲ ။ အရာရာမှာ အကောင်းနဲ့အဆိုး ဘက်နှစ်ဖက်ရှိစမြဲမို့ ရှိနေတဲ့အခြေအနေကို အကောင်းဘက်ရောက်အောင် ပြုပြင် ဖန်တီးခြင်းဟာ လူသားရဲ့အလှဖြစ်ပေတယ် လို့ ဆရာ ဦးသန်းထွန်း(ရွှေဘို) ရဲ့ မြို့ပြယဉ်ကျေးမှု အပေါင်းအနှုတ်မှာ ဖတ်ရှုရပါတယ် ။
ထိုနည်းတူစွာ ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် အဖြူရောင်မေတ္တာ လူငယ်များရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်များဟာလည်း ဒေါ်လာ သန်းထောင်ချီပြီး လှူဒါန်းမှု မဟုတ်သော်ငြား ၊ မိမိတို့ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် လှူဒါန်းနေကြခြင်း ၊ ဝေးမြေရပ်ခြားမှာ မြန်မာ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းတစ်ခုကို ထူထောင်နေခြင်းဟာဖြင့် လောကအလှတရားများထွန်းကားဖို့ အခြေခံကျတဲ့ ခြေလှမ်းများအဖြစ် မှတ်ယူမိပါတယ် ။
ဒါကြောင့် အဖြူရောင်မေတ္တာလူငယ်များရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်များကို လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုလိုက်ပြီး ၊ ဤဆောင်းပါးဖြင့် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာ ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ် ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 12:54 PM0comments
Labels: ဘ၀နေဟန်, ဘာသာရေး, လူမှုရေး, သတင်းဖတ်စာ, ဆောင်းပါး, မောင်းသတင်း
တစ်လိုက်ကြဟေ့ ညီနောင်များ အော့အိအီးအွစ်
မကြာသေးခင်က ၊ ဂဏန်း(၁)ကို (တစ်) လို့မရေးဘဲ (တ) ရေးကြဖို့ ဆော်သြထားတဲ့ အောန်လိုင်း မီဒီယာဆရာတစ်ဦးရဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ရပါတယ် ။ ကျနော်လည်း ဒီကိစ္စပြောချင်နေတာ ကြာပါပြီ ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခုမှ ဒီဆောင်းပါးကိုရေးဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီဆရာရဲ့ ဆောင်းပါးကို ချေပခြင်းမဟုတ်သလို ၊ မည်သူ့ကိုမျှ တိုက်ခိုက်လိုခြင်းမဟုတ်ပါ ။ (တစ်) နှင့် (တ) ရေးထုံးအပေါ် မိမိရဲ့ သဘောထားအမြင်ကို ရိုးရှင်းစွာ တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သဘောထား တိုက်ဆိုင်မှု ရှိခြင်း မရှိခြင်းမှာ စာရေးသူကိစ္စမဟုတ်ပါ ။ မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲပြားနိုင်ကြသည် ဟု သဘောထားပါတယ် ။
ဟိုးအရင်ကတည်းက တစ်/တ ပြဿနာရှိလာကြလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ် ။ ကျနော် အမှတ်မမှားဘူးဆိုလျင် ၁၉၇၈ ခုနှစ်လောက်က ဖြစ်လိမ့်မယ် ။ (မှားလျင် ပြင်ဖတ်ကြပါ)။
ဦးနေဝင်း လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်မှာပေါ့ ဂဏန်းတစ်ကို ၊ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ၊ ဘယ်စာလုံး နှင့်တွဲတွဲ တစ်ဟာတစ်ပဲ ဖြစ်ရမယ် ၊ တ ဖြစ်မသွားစေရဘူးဆိုတဲ့ သဘောကိုဆောင်တဲ့ ခေတ်ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။ အမိန့် ညွှန်ကြားချက် ထွက်လာပြီး ၊ တစ်ဂဏန်းနှင့် သက်ဆိုင်သမျှ ၊ တစ်လို့ပဲ ရေးခဲ့ကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ စာပေစီစစ်ရေးမှာ တင်တဲ့ စာမူတွေ တစ်နေရာမတစ်တဲ့သူများ ဒဏ်ကြေးဆောင်ကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ တစ်လုံးကို ဆယ်ပြား ဆိုလားပဲ ။ အခုတော့ ဈေးတက်ရော့ပေါ့ ။ စာနယ်ဇင်းတွေမှာလည်း တစ် ။ အဘိဓါန်တွေ မှာလည်း တစ် ။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းတွေမှာလည်းတစ် ။ ကျောင်းတွေမှာလည်းတစ် ။ ရုံးတွေမှာလည်းတစ် ။
ခန္တီစ ၊ မနိုင်၍ သည်းခံရခြင်းပေလော
ဘယ်သူမှ မတစ်လို့မရပါ ။ အားလုံးပဲ တစ်ခဲ့ကြရပါတယ် ။ တစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာနှင့် တစ်ခဲ့ကြရတာပါ ။ ဘယ် ခေတ်ပြိုင် မြန်မာစာ ပညာရှင် မှ ၊ မတစ်ဘဲ မတ ရဲပါ ။ ခေတ်ပြိုင်များလည်း ခေတ်မပြိုင်နိုင်ခဲ့ကြပါ ၊ အားလုံး သော မြန်မာစာ ပညာရှင် များလည်း ခေတ်ယိုင် ပညာရှင် ၊ ခေတ်ရှောင် ပညာရှင် နှင့် ခေတ်ယောင် ပညာရှင်များ ၊ ခေတ်အောင်း ပညာရှင်များ သာ ဖြစ်ကုန်ခဲ့ကြတယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ် ။
အဲ ၊ ၈၈ အရေးအခင်းအပြီး ၊ ပြည်တွင်းက ခေတ်အောင်း ပညာရှင်များ ပြည်ပကိုနည်း အမျိုးမျိုးနှင့် ရောက်လာကြတော့မှ ခေတ်အောင်းပညာရှင်များကနေ ခေတ်ပြိုင်ပညာရှင်တွေ အဖြစ် အသွင်ပြောင်း သွားကြပြီး ခေတ်ပြိုင် မြန်မာစာ ဆရာကြီးများလည်း အလျှိုအလျှို ပေါ်လာကြပါတော့တယ် ။ ခေတ်ပြိုင် မြန်မာစာဆရာများ အာဘော်အရ သိရတာကတော့ တစ် ဟာ အခြားသော စကားလုံးများနှင့် တွဲလိုက်လျင် စလုံးသတ်သည့် အသံကြေသွားပြီး (တစ်သံကိုချေပြီး) တ- ဖြစ်သွားတယ် ။ ဒါကြောင့် တစ်လို့မရေးဘဲ (တ) လို့ ရေးမှ မှန်တယ်တဲ့ ။ လူတစ်ယောက် ဆိုလျင် လူတယောက် /lu tajau!/ ။ မှန်ပါသည် ။ လူတစ်ယောက်/lu tit yau!/ ဟုမည်သူမျှ မဖတ်ပါ ။
ခွေးဒဂေါင် /khwei: ti! kaun/
ခွေးတစ်ကောင် ဆိုပါစို့ ခွေးတစ်ကောင် /khwe: ti! kaun/ ဟုမည်သူမျှမဆို ၊ ခွေးဒဂေါင်/khwei: dagaun/ ဟုသာ ဖတ်ကြပါတယ် ။ တစ်အသံသည် ကြေရုံမျှမက ဟိုဖက်လွန်ပြီး (တ) မှ (ဒ) အသံသို့ပင် ပြောင်းသွားပါတယ် ။ သို့ဆိုလျင် ခွေးတစ်ကောင် ဆိုလျင် တစ်-ကို ဒ ဟု ရေးသင့်သည်ဟု ခေတ်ပြိုင်မြန်မာစာ ဆရာကြီးများ ဘာကြောင့် စောဒက မတက်ကြပါသလဲ ။ ဒါ့အပြင် တစ်ယောက် တစ်ပေါက် ဆိုလျင်ရော ကျနော်တို့ တယောက်ဒဘောက်/tayau! dabau!/ ဟုပင် ဖတ်ကြရသည် မဟုတ်ပါလား ။ စဉ်းစားဖို့ မသင့်ပါလော ။
ကျနော်စဉ်းစား မိတာတွေ ရှိပါသေးတယ် ။
ခုနစ် ဆိုလျင် ခွန်နစ် /khun hni!/ ဟုသာ ရေးကြဖတ်ကြပါသည် ။ ခုနစ်ဆယ် ဆိုလျင်တော့ ခွန်နှဆယ် /khun hnahse/ နစ်မှ စလုံးသတ်အသံ ကြေရုံမျှမက ဟထိုးလေးပင် ထည့်ပြီးဆိုကြသေး ။ ဘာကြောင့် ခွန်နှဆယ် သို့မဟုတ် ခွန်နဆယ်ဟု ရေးရမည်ဟု စောဒက မတက်ကြပါသလဲ ။ ဒါ့အပြင် ခုနစ်စဉ်ကြယ်/khun hnasin kje/ ၊ ခုနစ်ထွေက/khun hnahtwei ga/ဆိုတာတွေရော ၊ အများကြီး ရှိပါသေးတယ် ။ ခုနစ် တစ်လုံးတည်းကိုသာ ခုနစ်/khun hni!/ ဟု ဖတ်ကြပြီး ၊ အခြားသော စကားလုံးများနှင့် တွဲလိုက်လျင် စသတ်အသံသည် ကြေသည်ပင်မဟုတ်ပါလား ခင်ဗျား ။
နှစ် /hni!/ နှစ် ဂဏန်းတစ်လုံးတည်းကိုသာ နှစ် /hni!/ ဟု ပီပီသသ ဖတ်ကြပြီး ၊ အခြားသော စကားလုံးများ နှင့် တွဲလိုက်လျင် စလုံးသတ်အသံသည်ကြေပြီး နှ /hna/ ဟုပင် ဖတ်ကြသည် မဟုတ်ပါလား ။ နှစ်ဆယ် ဆိုလျင် နှဆယ် /hna se/ ။ နှစ်ယောက် ဟုဆိုလျင် နှယောက် /hna jau!/ ၊ ကျန်တာတွေလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း ။ နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်/hnakou.dazei!/
အစ်ကို ဆိုလျင် အကို/ako/။ အစ်မဆိုလျင် အမ/ama./။ ညီအစ်ကိုဆိုလျင် ညီအကို/nji ako/။ ညီအစ်မဆိုလျင် ညီအမ/nji ama./။ ဘာကြောင့် စလုံးသတ်ကြီး မလိုအပ်ဘဲ ရေးနေကြပါသနည်း ။ စလုံးသတ်အသံသည် ကြေနေပါသဖြင့် အကို အမ (အစ်ကိုသည် အထီးမဟုတ်)ဟု ရေးရမည်ဟု ခေတ်ပြိုင်ပညာရှင်ကြီးများ မိန့်ကြားခြင်း မပြုကြပါသနည်း ။ ငဝိုင်း ဥာဏ်မမှီတော့ပါ ။
နေဝင်းမနိုင် တစ်ကို မီးရှို့
ကျနော် ဆိုခဲ့သလို တစ်ကဲ့သို့ပင် ခုနစ်ဂဏန်း ၊ နှစ် ဂဏန်း ၊ အစ်ကို ၊ အစ်မ အစရှိသော အလားတူ ဖြစ်စဉ်များ ရှိနေပါလျက် (တစ်) တစ်ခုတည်းကိုသာ တ-ဟုရေးသင့်ကြောင်း ပြောနေကြခြင်းမှာ ၊ ဦးနေဝင်း လက်ထက်တွင် တရားဝင်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်ကို မလိုလားသဖြင့် ၊ ဦးနေဝင်းနှင့်အတူ တစ်ကို ပါ ရောရောင်ပြီး အမုန်းပွါးနေကြခြင်းဖြစ်မည်လောဟု ကျနော်အတွေးဝင်မိပါသည် ။ ကံဆိုးသူ ငတစ် ဖြစ်ချေပြီ ။ ရှိသမျှပြစ်ဒဏ် ငတစ်ခံရလေပြီ ဟု ကျနော် တွေးမိသည် ။
ကိုကိုတစ်လို့ တို့ကတော့ ခေါ်မှာပဲဟေ
ဆိုခဲ့ပါ အကြောင်းများကြောင့် ၊ အများညီလျင်တော့ တစ်ကို တရေးရေး ၊ တ-ကို တစ်ရေးရေး ပြဿနာမဟုတ်ပါ ။ (တစ်) ကို (တ) ဟုသာ ရေးသင့်ကြောင်း ခေတ်ပြိုင်မြန်မာစာ ပညာရှင်များ ဖက်က ပိုမိုကောင်းမွန် ကြည်လင်သော သဘာဝယုတ္တိ နှင့် အခြေခံ အယူအဆများ ပိုမိုခိုင်လုံစွာ ပြသသင့်တယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ် ။
အဲသလိုသာ မဟုတ်လျင်တော့ ၊ စလုံးသတ်အသံကြေသဖြင့် (တစ်)ကို (တ) ဟုရေးသင့်ကြောင်း ဆိုကာမျှဖြင့်တော့ ၊ အများညီညီ မညီညီ တစ်ဟာတစ် တဟာတ ၊ ရေးတော့တစ် ဖတ်တော့ တ ၊ ပြောတော့စကား ရေးတော့စာ ၊ ရေးတော့အမှန် ဖတ်တော့ အသံ ဆိုသလို ကျနော် ငဝိုင်း တစ်ယောက် ကတော့ တစ်ကို တစ်လို့သာ ဆက်လက် သုံးစွဲ ရေးသားသွားမည်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 1:20 PM2comments
Labels: ဖတ်စရာ, မြန်မာစာ မြန်မာစကား, အယူအဆ, ဆောင်းပါး
ရေးသားသူ — မောင်ဘမောင်(ဘုန်းစိုး)
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ကံ,ကံ၏အကျိုးကိုယုံကြည်ကြပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ “ကံဆိုတာဘာလဲ” ဆိုတာကိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း မှန်မှန်ကန်ကန် မသိကြဘူး၊ သိသလိုလိုနဲ့ ကျေနပ်နေကြတယ်၊ ဒါကြောင့်ကံနဲ့ပတ်သက်လို့ ဂဃနဏ နားလည်ထားဖို့လိုတယ်၊ ဒါမှသာ မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိသူဖြစ်မယ်။
Ven.Dr.K. Sri Dhammananda ရေးသားတဲ့ What Buddhist Believe မှာ ဆရာတော်ကြီး ရှင်းပြထားတာ အတော်ကောင်းတယ်၊ ဒါကို ပိုပြီးနားလည်လွယ်အောင် ဆရာဦးဆန်းလွင် (ရှင်အာဒိစ္စရံသီ) က ဘာသာပြန် ပေးထားတယ်။ အဖေလည်း အတော်ကလေး နှစ်သက်တဲ့အတွက် သမီးကိုပြန်ပြောပြမယ်၊ လေးနက်စေချင်လို့ တဆင့်ခံအနေနဲ့ မပြောတော့ဘူး တိုက်ရိုက်ပြောဟန်နဲ့ပဲပြောမယ်နော်။
ကြုံလို့ပြောပြရဦးမယ် ဒီဆရာ ဦးဆန်းလွင်က မိရိုးဖလာ အစ်ဆလမ်ဘာသာဝင်ပါ ကိုးကွယ်မှုအမှန်ကို ရှာဖွေရင်း ဘာသာပေါင်းစုံကို ထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာတယ်၊ ဘယ်ဘာသာမှာမှ သူလိုချင်တဲ့အဖြေကိုမရဘူး။ နောက်ဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကမှ သူလိုချင်တဲ့အဖြေကို ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားတာ။ အသက်၅၅နှစ်မှာ ရဟန်းဝတ်ပြီး (ရှင်အာဒိစ္စရံသီ) ဘွဲ့အမည်နဲ့ သာသနာပြုသွားတယ်။ အခုတော့ ပြန်လွန်တော်မူသွားတာ ၅နှစ်လောက်ရှိပြီ။ ဒီဆရာက အဖေရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ပါ၊ အဖေ့ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်ဖြစ်အောင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း လေ့လာဖြစ်အောင်၊ ဗုဒ္ဓအလိုကျ ကျင့်သုံးနေထိုင်တတ်အောင် စတင်တွန်းအားပေး လှုံ့ဆော်သွားတဲ့ ဆရာတစ်ဆူပါ။ အဖေ လူကိုယ်တိုင် မတွေ့ဘူး၊ မဖူး,ဘူးပေမဲ့ ရင်ထဲကအသိအမှတ်ပြုပြီး ဆရာ့ရဲ့ ကလျာဏ ပုထုဇဉ် ထွန်းကားရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို အဖေ တတ်နိုင်သလောက် ဆောင်ရွက်နေတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ဆရာ့ကျေးဇူး သာသနာ့ကျေးဇူးကို ပေးဆပ်နေတယ်။ ဒါအဖေ့ အကြောင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ။
ကံဆိုတာကို အလွယ်ဆုံးစကားနဲ့ပြောရင် ကောင်းတာလုပ် ကောင်းတာဖြစ်တယ်။ မကောင်းတာလုပ် မကောင်းတာဖြစ်တယ်။ ဒီဘ၀မှာရော နောင်သံသရာမှာရော ကံ၊ ကံ၏အကျိုးကို ခံစားကြရမယ် ဖြစ်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သီးနှံစကားနဲ့ပြောရင်တော့ မျိုးကောင်းတဲ့စပါးကိုစိုက်ရင် ရိတ်သိမ်းတဲ့အခါ မျိုးကောင်းတဲ့ စပါး သီးနှံတွေကို ရမယ်။ မျိုးညံ့တဲ့မျိုးစေ့ကိုစိုက်ရင် သီးပွင့်ရင်မှဲ့တဲ့အခါ မျိုးညံ့တဲ့ သီးနှံစပါးတွေကိုပဲ ရတဲ့သဘော ဖြစ်တယ်။
သိပ္ပံစကားနဲ့ပြောရင် ကံ(ကမ္မ)ရဲ့ သဘောဟာ အကြောင်းအကျိုး သဘောပဲ။ အကြောင်းတရား မှန်သမျှမှာ အကျိုးရလဒ်တစ်ခု ရှိတာချည်းပါပဲ။ ကံရဲ့သဘောကို နောက်တစ်မျိုး နာမည်ပေးပြီး ပြောရရင်တော့ ကံဟာ အကျင့်စရဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းတရားပါ၊ ရုပ်လောကမှာ ရုပ်ပိုင်းနိယာမတရားတွေက ပြုပြင်ဖန်တီးနေသလို ကိုယ်ကျင့်သီလစရဏ နယ်မှာလည်း သူ့နိယာမနဲ့သူရှိတယ်။
ဓမ္မပဒထဲမှာ ကမ္မ(ကံ)ကို ဖော်ပြထားပုံက ကောင်းမှုကံ၊ မကောင်းမှုကံတို့ကို စိတ်ကသာ ဦးဆောင်တယ်။ စိတ်ကောင်း မနောကောင်းနဲ့ ပြောဆိုပြုမူရင် အကျိုးရလဒ်က စိတ်ချမ်းသာစရာ ပျော်ရွှင် ၀မ်းမြောက်စရာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကိုယ့်အရိပ်က ကိုယ့်ကို မစွန့်သလို အကျိုးပေးမှာပဲ။ စိတ်ယုတ်၊ စိတ်ညံ့နဲ့ ပြုမူပြောဆိုရင်တော့ စိတ်ဆင်းရဲစရာ၊ စိတ်မချမ်းသာစရာ အကျိုးရလဒ်မျိုးတွေဟာ လှည်းဘီးက နွားခြေရာကို လိုက်နင်းသလို ကံပြုတဲ့သူကို လိုက်ပြီး အကျိုးပေးလာမှာပဲ။
ကံဆိုတာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြောရင်တော့ အပြုအမူပဲ အလုပ်ပဲ။ သက်ရှိရုပ်ရဲ့ အင်္ဂါတွေထဲမှာ စေ့ဆော်နေတဲ့ စွမ်းအားတစ်ခု ရှိတယ်။ ဗီဇစေ့ဆော်မှုသဘော သိမှုသဘော တွေပဲ၊ မွေးရာပါ ဒီစိတ်နေ စိတ်ထား၊ စိတ်စွမ်းအားတွေက သိစိတ်ရှိသူတွေကို ပြုမူလှုပ်ရှားနိုင်အောင် စေ့ဆော်တိုက်တွန်းနေကြတယ်။ သတ္တ၀ါတွေဟာ ရုပ်ပိုင်းအရရော၊ စိတ်ပိုင်းအရရော စေ့ဆော်မှုကိုခံပြီး လှုပ်ရှားကြရတယ်။ သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာ ကံပါပဲ။ ဒီကံကို ထပ်တလဲလဲ လုပ်ဖန်များတော့ အထုံဝါသနာ ဖြစ်လာတယ်။ ဒီအထုံ ၀ါသနာကနေ နောက်ကျတော့ စိတ်နေစိတ်ထား စရိုက်သဘာဝတွေ ဖြစ်လာတော့တာပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ ဒီဖြစ်စဉ်ကို ကမ္မ(ကံ)လို့ခေါ်တယ်။
ကံဆိုတာ ကုသိုလ် အကုသိုလ် သဘော နှစ်မျိုးလုံးကိုဆိုလိုတယ်။ စိတ်ဆန္ဒနဲ့ စေတနာနဲ့ ပြုလုပ်ဆေင်ရွက်မှုမှန်သမျှဟာ ကံဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ကံဆိုတာ အထည်ဒြပ်အနေနဲ့ ရှိနေတဲ့ ဖြစ်တည်မှု အစစ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ သူက ပြုမူမှု၊ ဆောက်ရွက်မှု ဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာ ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာစွမ်းအားတစ်ခု စွမ်းအင်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်။ အထည်ဒြပ်ရှိတဲ့အရာ မဟုတ်ဘူး။ တချို့က ဒီကံစွမ်းအင်ကို အပြုအမူ သြဇာသက်ရောက်မှု (action influence) ဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြတယ်။ ဒါဟာ မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆောင်ရွက်မှု တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ဒုက္ခ၊ သုခ ဆိုတဲ့ လူတွေ တွေ့ကြုံခံစား နေကြရတာတွေဟာ ကိုယ်ပြုတဲ့ကံက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အကျိုးရလဒ်တွေပဲဖြစ်တယ်။ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံ တွေရဲ့ ရလဒ်တွေပဲဖြစ်တယ်။ မိမိတို့ရဲ့ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံ ရလဒ်တွေက မိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှု ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ သုခ ဒုက္ခကို ဖြစ်စေတယ်။
ကမ္မဆိုတာ မမြဲတဲ့ အစိုးမရနိုင်တဲ့သဘောရှိတဲ့ သဘာဝ နိယာမ တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ ဒီ နိယာမဟာ မိမိတို့ရဲ့ အပြုအမူအတိုင်း လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်ပေါ်နေရတယ်။
ဒါဟာ နိယာမသက်သက်၊ သူ့သဘောကို သူဆောင်ပြီးဖြစ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမျှဖြစ်တယ်။ ဒီနိယာမကို ပြုလုပ်သူ၊ ပေးကမ်းသူ ‘ဥပဒေပြုသူ’ မရှိဘူး။ ဒီကမ္မ နိယာမဆိုတာ သူ့သဘောသူဆောင်ပြီး သူ့နယ်မှာသူ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တရားဖြစ်တယ်။ ပြင်ပက ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ ကြားလူ၊ ဒီနိယာမအပေါ်ကနေပြီး ချုပ်ကိုင် ချယ်လယ်သူ မရှိဘူး။ ကမ္မနိယာမ နောက်ကွယ်က ပုန်းလျှိုးပြီး ကြိုးဆွဲနေသူ၊ ချုပ်ကိုင်ခြယ်လှယ်နေသူ၊ စွက်ဖက်နေသူ၊ ညွှန်ကြားနေသူလည်းမရှိဘူး၊ ကံဟာ သူ့ဘာသာသူ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေးနေတာ ဖြစ်တယ်။ ကံပြုသူကို ဆုပေးသူ၊ အပြစ်ဒဏ်စီရင်နေသူ အလွတ်သီးခြားမရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ ဆုတောင်းခြင်းအပေါ် အားကိုးအားထားမပြုဘူး။ ကံကိုခြယ်လှယ်နေတဲ့ သဘာဝထက် လွန်ကဲတဲ့ တန်ခိုးရှင်ဆီမှာ လက်ဝါးဖြန့် ထူးထောက်ပြီးလည်း ဆုမတောင်းဘူး။ ကိုယ်လုပ်မှကိုယ်ရတယ်၊ ကိုယ်လုပ်သလို ကိုယ်ရမယ်လို့ပဲ ယုံကြည်ယူဆကြတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ အလိုတော်အရက ကံဟာ ကြိုတင်ပြုပြင်ထားတဲ့ ကြမ္မာဖူးစာ သဘောမဟုတ်ဘူး။ ကြိုတင်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းခံသဘော (determinism) မဟုတ်ဘူး။ (တခြားဘာသာတွေမှာ ယုံကြည်လက်ခံထားကြသလို ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်း ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ ကြိုတင်ပြီး တန်ခိုးတော်ရှင်ရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထားတာ လုံးဝမဟုတ်ဘူး)။ အဲဒီ တန်ခိုးတော်ရှင်တွေက ပြုပြင်စီမံသလို ခံနေကြရတယ်ဆိုပြီး ယုံကြည်ကြလို့ အဲဒီတန်ခိုးတော်ရှင်တွေကိုပဲ ၀တ်ပြုဆုတောင်းပြီး ပူဇော်ပသရတာမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ လုံးဝ မရှိဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ လူဟာ သူတို့ စိုက်ပျိုးတဲ့ ကောက်ပဲသီးနှံကို သူတို့ ရိတ်သိမ်းယူဆောင်ကြရတာပဲ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူပေးလို့မှ ရတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်လုပ်ခဲ့လို့ ကိုယ်ရတာပဲ ဖြစ်တယ်။ ကိုယ် ပြုခဲ့တဲ့ကံရဲ့ အကျိုးဝိပါတ်ကို ကိုယ် ခံစား စံစားကြရတာပဲ ဖြစ်တယ်။ အနာဂတ်မှာလည်း ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ ကောင်းမှုကံ မကောင်မှုကံ အတိုင်းပဲ ရကြ၊ ဖြစ်ကြရဦးမှာသာ ဖြစ်တယ်။
တနည်းပြောရရင် လူသားဟာ သူအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ တစ်သမတ်တည်း ဖြစ်တည်မနေဘူး။ ဆိုလိုတာကတော့ ကမ္မနိယာမဆိုတာ ပြဋ္ဌာန်းခံ အယူဝါဒ မဟုတ်ဘူး။ Determinism မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတယ်။ ( ဥပမာ- အတိတ်ကံကြောင့် သူဆင်းရဲ ဘ၀မှ မွေးဖွားလာသူဖြစ်ပေမဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကံကြောင့် အဲဒီလူ ချမ်းသာနိုင်တယ်၊ ဘ၀အဆင့်အတန်း မြင့်မားနိုင်တယ်။)
မြတ်ဗုဒ္ဓက အရာရာဟာ ကြိုတင်ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်တဲ့ ကြမ္မာအတိုင်းပဲ ဖြစ်ကြရတယ်ဆိုရင် ဆန္ဒလွတ်လပ်ခွင့် ဆိုတဲ့ သဘောတရားလည်း ဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။ ဒီလို မိမိဘာသာ ကြိုက်ရာကို ဆန္ဒအလျောက် ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခွင့်၊ လုပ်ကိုင်ခွင့် မရှိရင် ကိုယ်ကျင့်သီလ ဆိုတာရော၊ အရိယာ ဘ၀မျိုးဆိုတာတွေရော ရှိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ထောက်ပြတော်မူတယ်။ အဲဒီလိုသာဆိုရင် လူသားဟာ အတိတ်ဘ၀ရဲ့ ကျေးကျွန်ဘ၀မှာပဲ ကံစီမံရာခံနေကြရတော့မှာပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရင် အရာခပ်သိမ်းဟာ ကံပြုပြင်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေကြတာလို့ ဆိုပြန်ရင်လည်း အကျင့်သီလ စရဏကို ပြုစုပျိုးထောင်တာတွေ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် မြတ်ဗုဒ္ဓက လုံးဝပြဋ္ဌာန်းခံဝါဒ ( determinism ) ကိုရော လုံးဝပြဋ္ဌာန်းကင်းဝါဒ ( indeterminism ) ကိုရော ပယ်တော်မူခြင်းဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ထားသင့်တယ်။
သမီးရေ ဒီကမ္မနိယာမက ခက်လည်းခက်၊ နက်လည်းနက်တယ်၊ သေချာနားလည်နိုင်အောင်ဖတ်ပါ၊ လေ့လာပါ မရှင်းတာရှိခဲ့ရင် ပြန်မေးပါ။
မြတ်ဗုဒ္ဓက ဒီကမ္မနိယာမကို ဘာကြောင့်ဟောရတယ်ဆိုတာကို ရှေ့အပတ်မှ ဆက်ပြီးရှင်းပြမယ်နော်။
ဒီတစ်ပတ်အလုပ်တွေများနေလို့ စာရေးကျဲတာ နားလည်ပေးနော်..။
Posted by မောင်ဘမောင်(ဘုန်းစိုး) at 11:10 AM0comments
Labels: ဖတ်စရာ, ဘ၀နေဟန်, ဘာသာရေး
Lazy Club Live in Korea 2010 မြန်မာအထူးဂီတပွဲတော် ကျေးဇူးတင်လွှာ
စက်တင်္ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က ဘူချောန်း ပြည်သူ့ခမ်းမ (Bucheon Citizen Hall) တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာပြန့်ပွါးရေးရန်ပုံငွေရရှိရေး Lazy Club Live in Korea 2010 မြန်မာ အထူးဂီတပွဲတော် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ၊ အဖက်ဖက်မှ ကျေးဇူးပြု ဝိုင်းဝန်း ကူညီ ပေးခဲ့ကြသည့် -
- Lazy Club Band မှ ကိုစိုးနိုင်ထွန်း (မန်နေဂျာ) နှင့်အတူ ၊ နိုင်ဇော် (လီဒ်) မျိုးဇော် (ကီးဘုတ်) ဂျင်ပိ (ဘေ့စ်) မရခိုင် (ဒရမ်) ၊
- တေးသံရှင် (ဦး) ခင်မောင်တိုး ၊ အယ်လ်လွန်းဝါ ၊ ဟဲလေး ၊ ချစ်သုဝေ ၊ သဇင် ၊ ဂျဲနီ နှင့် ဧည့်အဆိုတော် ချစ်ဆုဝေ ၊
- ဘူဖြောင်း လွတ်တော်အမတ် မစ္စတာ ဂျိုဂျင်ဟျောင်း (조진형)
- ဘူချောန်း လွတ်တော်အမတ် မစ္စတာ လင်ဟဲကယူ (임해규)
- ဘူချောန်းမြို့တော်ဝန် မစ္စတာ ကင်မန်ဆု (김만수)
- ဘူချောန်း မြို့တော် အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ (부천시의회)
- မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဂျိုဗြောင်ဂျဲ(조병제)
- ဘူချောန်း ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရိပ်သာ(부천외국인노동자의집) နှင့် လင်ယောင်ဒန်ဆရာတော် (임영담 주지스님)
- မစ္စတာ အိအီးလ်ဂျု (이일주)
- မစ္စတာချွဲယုန်ဆောက် (최용석)
- မြန်မာအသင်း(ကိုရီးယား) နှင့် ကိုဝင်းမြင့်ဦး
- Bucheon Culture Foundation မှ တာဝန်ရှိသူများ ၊
- ဂွမ့်ကန်ဂျောင်ဆာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (금강정사) ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီးနှင့် ဂေါပကအဖွဲ့ ၊
- ဓမ္မဒူတဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း(ကိုရီးယား) အမှုဆောင်အဖွဲ့ ၊
- စကားပြန်များအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြသည့် မလွင်လွင်ချိုနှင့် မယဉ်ယဉ်အေး ၊
- ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင် ကိုထွန်းထွန်းလတ် ၊ ကိုရဲမြင့် ၊ ကိုထွန်းထွန်း ၊ စိုင်းမောက်ခေခမ်း ၊ ကိုမြင့်ကျော် (Y.I.T) ၊ ကိုအောင်တင်ထွန်း (MWTV) နှင့် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတင် ကိုဝင်းထွန်း ၊
- စည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းရေး တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြသည့် မြန်မာညီနောင်များ ၊ နှင့်
- ရာသီဥတု ဆိုးရွားနေသည့်ကြား ဂီတပွဲတော်အစအဆုံး ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသည့် ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ၊
အားလုံးတို့ကို ၊ အထူးဂီတပွဲတော် ကျင်းပရေးကော်မတီက အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ဟန်းဂုရွာမှတစ်ဆင့် အမှာစကားပါးအပ်ပါသည် ။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်္ဘာလ ၂၃ ရက် ၊
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 1:28 PM0comments
Labels: ဘာသာရေး, ကျေးဇူးတင်လွှာ, ဖျော်ဖြေရေး, ကြေညာချက်, မောင်းသတင်း
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဧရာဝတီတိုင်း ၊ ဖျာပုံမြို့နယ် ၊ ကျုံကျိုက်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကျုံသင်ကျေးရွာ ဆေးပေးခန်းအတွက် ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာညီအစ်ကိုမောင်နှမများ စုပေါင်း၍ လှူဒါန်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရာ ၊ ယခုအခါ ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများက အဆိုပြု မျှော်မှန်းထားသည့် အလှူငွေများ ပြည့်စုံလုံလောက်စွာ ကောက်ခံရရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ။
အဆိုပါ ကျုံသင်ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ ၁၁၆ အိမ်တွင် ၊ လူဦးရေ ၅၀၀ ခန့်နေထိုင်ကြလျက်ရှိပြီး ၊ သွားရေးလာရေး ခက်ခဲသောကျေးရွာဖြစ်သည် ။ ယခုအခါ ကျေးရွာ လူထုကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအတွက် အစိုးရထံမှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း (သားဖွားဆရာမ) တစ်ဦး ရရှိထားကြောင်း ၊ သို့ရာတွင် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းကိုမူ မည်သည့်အချိန်တွင် ရရှိမည်ကို မသိရှိနိုင်သေး ကြောင်း ၊ ကျေးရွာလူထုအတွက် ကျေးရွာဆေးပေးခန်း တစ်ခုလိုအပ်နေကြောင်း ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ဆေးပေးခန်း တစ်ခု ဆောက်လုပ်လိုကြသော်လည်း နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ကျေးရွာဖြစ်နေသဖြင့် လုပ်အား အကူအညီကိုသာပေးနိုင်ပြီး ငွေရေးကြေးရေး အခက်အခဲ ရှိနေကြ ကြောင်း ၊ ထို့ပြင် အကြောင်းအမျိုးမျိုး အခက်အခဲအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ ၏ အကူအညီ ကိုလည်း မရရှိနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေ ကြောင်း ၊ ဆေးပေးခန်းမှာ ကျပ်သိန်း ၃၀ ခန့်ကုန်ကျမည် ဟု တွက်ချက် ခန့်မှန်းထားကြကြောင်းလည်း သိရသည် ။
စိတ်တူကိုယ်ညီ ညီအစ်ကိုမောင်နှများက အဆိုပါကွက်လပ်ကို ဖြည့်ဆည်းသော အားဖြင့် ၊ ကိုရီးယား နိုင်ငံရောက် ညီအစ်ကိုမောင်နှတို့၏ ချွေးနှဲစာများကို စုစည်းပြီး ကောက်ခံပေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ သင်္ကြန်ပွဲတော်လာ ညီနောင်များက ၁၇ သိန်း နီးပါးလှူဒါန်းခဲ့ကြပြီး ၊ ပြီးခဲ့သည့် ချူးဆောက် ပိတ်ရက်တွင် ကျင်းပသည့် တိလောက ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်လာ ညီနောင်များက သိန်း ၂၀ ခန့် ထည့်ဝင် လှူဒါန်းခဲ့ကြကြောင်း သိရသည် ။
အလှူရှင်များ၏ လှူးဒါန်းငွေစာရင်း အပြည့်အစုံကို (ဤနေရာ)တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း သိရသည် ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 1:19 PM0comments
Labels: နာဂစ်, လူမှုရေး, သာဓုအနုမောဒနာ, ကြေညာချက်, မောင်းသတင်း
ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) ၄ ကြိမ်မြောက် စုပေါင်းဒုလ္လဘရဟန်းခံပွဲ မှတ်တမ်းပုံများ
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 10:45 PM0comments
Labels: ဘာသာရေး, မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ, သာဓုအနုမောဒနာ, မောင်းသတင်း
Lazy Club Live in Korea 2010 ဂီတပွဲတော် မှတ်တမ်းပုံများ
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 10:44 PM0comments
Labels: ဘ၀နေဟန်, မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ, ဖျော်ဖြေရေး, မောင်းသတင်း
မြန်မာအလုပ်သမား ၂ ဦးအလိုရှိသည်
ဂင်ဖို ၊ ယန်းဂုတ် ။
နေ့ဆိုင်း ၊ ညဆိုင်း ။
ဗီဇာ ရှိ / မရှိ ၊ ပြဿနာမရှိ ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 7:03 PM0comments
Labels: အလုပ်ကြော်ငြာ, မောင်းသတင်း
အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား အလုပ်စာချုပ်သက်တမ်း အငြင်းပွါးသည့် ပြဿနာ
အဓိပ္ပါယ် မရှင်းလင်းတဲ့ စာချုပ်လေးကြည့်ပေးပါ
ညီငယ်တစ်ယောက်က သူ့အလုပ်စာချုပ်မိတ္တူ ပေးပို့ပြီး အကြံတောင်းခံလာပါတယ် ။ စာချုပ်သက်တမ်း ပြည့်မပြည့် သူ့သူဌေးနှင့် အငြင်းပွါးနေရလို့ပါတဲ့ ။ သူ့သူဌေးက စက်ရုံဝင်တဲ့နေ့မှ ၁ နှစ်ပြည့်မယ် ။ ၁ နှစ်ပြည့်မှ လုပ်သက်ဆုကြေးရမယ်လို့ ပြောနေတယ် ။ ပြည်ဝင်ရက်နှင့် အလုပ်ဝင်ရက်က ၁၂ ရက်ကွာနေတယ် ။ ဗီဇာသက်တမ်းပဲ ထပ်တိုးရမလား ။ ဗီဇာကုန်ရက်က ချူးဆောက်ပိတ်ရက်အတွင်းဖြစ်နေတယ် ။ ဗီဇာကြိုတိုးလို့ရမလား ။ နောက်ပြီး စာချုပ်မှာပါတဲ့ “ အလုပ်စာချုပ်မှ လစာငွေပေးသည့်နေ့အား ဆိုက်ရောက်နေ့အဖြစ် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ကာ ၊ အလုပ်စာချုပ်သက်တမ်းကာလအား ကိုရီးယားသို့ ဆိုက်ရောက်သည့်နေ့မှ စ၍ တစ်နှစ်ဖြစ်သည် ။” ဆိုတာ ကျနော် မရှင်းဘူး ။ လစာပေးတဲ့နေ့ဟာ ဆိုက်ရောက်နေ့အဖြစ်ပြောင်းရမယ်ဆိုရင် ၊ ကျနော်တို့ ဆိုက်ရောက်နေ့ဟာ ၁ နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သဘော ဖြစ်နေတယ် ။ နောက် “အလုပ်စာချုပ်သက်တမ်းကာလအား ကိုရီးယားသို့ ဆိုက်ရောက်သည့်နေ့မှ စ၍ တစ်နှစ်ဖြစ်သည်” လို့လည်း ဆိုထားပြန်တော့ စာချုပ်က ဆိုက်ရောက်နေ့မှာ ၁ နှစ်ပြည့်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား ။ အဲဒါ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုပြီး အကြံအိုက်နေလို့ အကူအညီတောင်းရတာပါတဲ့ ။
အီးပီစာချုပ်ပါ မရှင်းလင်းသော ဘာသာပြန်ချက်
သူ့စာချုပ်ကိုလည်း ဖက်စ်နှင့် ပို့ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ကျနော်ယူ ကြည့်လိုက်တော့ ၊ ဒီလိုတွေ့ရတယ် -
 ------ ခုနှစ် ------------လ ---------ရက် မှစ၍ ------ ခုနှစ် ------------လ ---------ရက် ထိ။
 -------- 년----------월----------일부터-------년------- 월------- 일 까지.
 အလုပ်သင်ကာလ ( ) ပါဝင် ။/(ကိုရီးယားသို့ ဆိုက်ရောက်သည့်နေ့မှစ၍ ( ) ၁လတာ ၊ ( ) ၂လတာ၊ ( ) ၃လတာ) ။ /( ) မပါဝင် ။
 ကိုရီးယားသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်သူ ဖြစ်ပါက ၊ အလုပ်စာချုပ်မှ လစာငွေပေးသည့်နေ့အား ဆိုက်ရောက်နေ့အဖြစ် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ကာ ၊ အလုပ်စာချုပ်သက်တမ်းကာလအား ကိုရီးယားသို့ ဆိုက်ရောက်သည့်နေ့မှ စ၍ တစ်နှစ်ဖြစ်သည် ။
 수습기간 ( ) 활용/입국일로부터 ( ) 1개월, ( ) 2개월, ( ) 3개월)/, ( ) 미활용.
 최초 입국자의 경우 근로계약기간의 기산일은 입국일 이며 근로계약기간은 입국일부터 1 연임.
အဲဒီ စာပိုဒ်ကို ကျနော်က ဒီလို ဘာသာပြန်ချင်တယ် ။ “ ကိုရီးယားသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်သူ ဖြစ်ပါက ၊ အလုပ်စာချုပ်သက်တမ်း စတင် တွက်ချက် (အသက်ဝင်) သည့်နေ့သည် ပြည်ဝင်နေ့ဖြစ်ပြီး ၊ အလုပ်စာချုပ်သက်တမ်းမှာ ကိုရီးယားသို့ ဆိုက်ရောက်သည့် နေ့မှ စ၍ ၁ နှစ်ဖြစ်သည် ။”
“근로계약기간의 기산일은” ဆိုတာကို “အလုပ်စာချုပ်မှ လစာငွေပေးသည့်နေ့အား”ဆိုပြီး ဘာသာ ပြန်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ် ။ အမှန်က “အလုပ်စာချုပ်သက်တမ်း စတင် တွက်ချက်သည့်နေ့သည်” ဆိုပြီး ပြန်ရမှာပါ ။
ကျနော့် သဘောအတိုင်း အဲ ဒီ အလုပ်စာချုပ်ကို ပြန်ပြင်ရေးရရင်တော့ ၊ “ ကိုရီးယားသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်သူ ဖြစ်ပါက ၊ ကိုရီးယားသို့ စတင်ရောက်ရှိသည့် နေ့တွင် အလုပ်စာချုပ် စတင် အသက်ဝင်ပြီး ၊ အလုပ်စာချုပ်သက်တမ်းမှာလည်း ကိုရီးယားသို့ ဆိုက်ရောက်သည့် နေ့မှ စ၍ ၁ နှစ်ဖြစ်သည် ။” လို့ ပြင်ပြီး ရေးလိုက်ချင်ပါတယ် ။
စာချုပ်သက်တမ်းသည် ပြည်ဝင်ရက်မှ ၁ နှစ်ပြည့်လျင်ကုန်၏
ဒုတိယ စာပိုဒ်အရ ၊ ကိုရီးယားသို့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရောက်လာသူများ (ရောက်လာသူများအဖြစ် မှတ်ယူရမည့် သူများ) ဟာ စာချုပ်မှာပါတဲ့ အလုပ်သင်ကာလ “ပါဝင်” ၊ “မပါဝင် ” ကိစ္စ ပြဿနာ မရှိတော့ဘဲ ၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အလုပ်စာချုပ်သက်တမ်း ဟာ ပြည်ဝင်ရက်မှာ အသက်ဝင်လာပြီး ၊ စာချုပ်သက်တမ်းကိုလည်း (ပြည်ဝင်ရက်မှ) ၁ နှစ် သတ်မှတ်ထားတာ ကို တွေ့ရပါတယ် ။
စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်မကုန် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရုံး (고용지원센터) မှာ သွားရောက်ပြီး အတည်ပြုချက် ယူလိုက်စေလိုကြောင်း အကြံပြုလိုက်ပါတယ် ။
အလုပ်သမားရုံးက နေပြီး သူ့သူဌေးဆီကို စာတိုလေးရေးပေးလိုက်တယ် ။ ဘာတွေရေးထားမှန်းမသိလို့ ၊ သူဌေးကို မပြရဲသေးဘူးတဲ့ ။ အစ်ကိုကြီး ဘာသာပြန်ပေးပါဦး ဆိုပြီး ၊ ဖက်စ်နှင့်ပို့လိုက်ပါတယ် ။ စာတိုလေးက ဒီလိုပါ -
“ 21일까지 이분이 1년 되는 날인데 20일 까지 일하고 추석때문에, 21 일자로 고용변동 처리 해주시길 바랍니다.
// ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ၁ နှစ်ပြည့်တဲ့ နေ့ဖြစ်တာမို့ ၊ ၂၀ ရက်နေ့အထိ အလုပ်လုပ်ပြီး ၊ ချူးဆောက် (ပိတ်ရက်) ကြောင့် ၊ ၂၁ ရက်နေ့မှာ အလုပ်ရုံပြောင်းရွှေ့ဖို့ လုပ်ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ။
ဂုမီ အလုပ်သမား ဆင်တာ
ကင် ကယောင်းမို ”// တဲ့ ဗျ ။
ဒါကြောင့် အီးပီ ညီငယ်များကို အကြံပြုချင်တာက ၊ ကိုယ့်အလုပ်ရှင် ကိုယ့်သူဌေးနှင့် အလုပ်စာချုပ် သက်တမ်း ကိစ္စဖြစ်ဖြစ် ဘာကိစ္စဖြစ်ဖြစ် မရှင်းမရှင်း အငြင်းပွါးရမယ့် ပြဿနာ ပေါ်လာရင် ၊ မိမိတို့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားဆင်တာ (고용지원센터) သို့ အရောက်သွားပြီး အတည်ပြုချက် (ဆုံးဖြတ်ချက်) ရယူကြစေလိုကြောင်း အကြံပြုလိုက်ရပါတယ် ။
အားလုံး အဆင်ပြကြပါစေ ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 8:47 AM0comments
Labels: အလုပ်ခွင်ရေးရာ, ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်း, ဆောင်းပါး, မောင်းသတင်း
ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် ရွှေညီအစ်ကိုအပေါင်းတို့ခင်ဗျား လာမည့် ချူးဆောက်ပိတ်ရက် (၂၁-၉-၂၀၁၀) ရက် ပထမ နေ့၌ ကျွန်တော်များ အလှူရှင်ဖြစ်သော ကိုဘိုဘိုဇော် နှင့် သူငယ်ချင်းများ မှ ယခင် မြန်မာထမင်းဟင်း ကျွေးမည့် အစီအစဉ်အား ဖျက်၍ ယ္ခု အခါ
(မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော်)၌ဘုရားအမှူး ရှိသောသံဃာတော် အရှင်မြတ်တို့အား အရုဏ်ဆွမ်း - နေ့ဆွမ်းနှင့် ကြွရောက်သာသော ဧည့်ပရိတ်သက် တို့အားထူးရှယ် ဒါန်ပေါက် ဖြင့် ဧည့်ခံပါမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြင်ဆင် ဖိတ်ကြားအပ်သည်။
Posted by မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် at 8:36 AM0comments
Labels: ဖိတ်စာ, ဘာသာရေး, မောင်းသတင်း
အနုပညာရှင်များ ကိုယ်တိုင် ဂီတပွဲတော် လက်မှတ်များရောင်းချပေးမည်
လာမည့် ချူးဆောက်ပွဲတော်ပိတ်ရက် ပထမနေ့ (စက်တင်္ဘာ ၂၁ ရက်နေ့) ဘူချောန်းပြည်သူ့ခမ်းမ (Bucheon Citizen Hall) တွင် ကျင်းပမည့် Lazy Club Live in Korea 2010 အထူး ဂီတပွဲတော်၌ ပါဝင်သီဆို ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ကြမည့် အနုပညာရှင်များက ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာမိတ်ဆွေများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံကာ ၊ အထူး အစီအစဉ် အဖြစ် အမှတ်တရ လက်မှတ်များ ရေးထိုးပြီး ပွဲလက်မှတ်များကို အောက်ပါ အစီအစဉ်များ အတိုင်း ရောင်းချ ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည် -
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်္ဘာလ ၁၉ ရက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ (တစ်ရက်တည်းသာ)
အချိန် နှင့် နေရာ -
- ညနေ ၃ နာရီမှ ၄နာရီခွဲထိ ၊ စကားဝါ စားတော်ဆက် ။
- ညနေ ၅ နာရီမှ ၆နာရီခွဲထိ ၊ အမေ့အိမ် စားတော်ဆက် ။
- ည ၇ နာရီမှ ၈ နာရီခွဲထိ ၊ မြန်မာသူကြီး စားတော်ဆက် ။
မရှင်းလင်းသည်များရှိပါက 010-4626-7571, 011-9360-1792, 010-9086-2290 နှင့် 010-2331-2457 တို့ထံ မေးမြန်းနိုင်သည်ဟု အဆိုပါ အထူးဂီတပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီ၏ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်္ဘာလ ၁၇ ရက် ရက်စွဲပါ ကြေငြာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည် ။
ယမန်နေ့က လေဇီကလပ်တီးဝိုင်း မန်နေဂျာ ကိုစိုးနိုင်ထွန်း ကိုရီးယားသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဂီတပွဲတော်အတွက် စီမံချက်နှင့်အညီ လိုအပ်သည့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ၊ လေဇီကလပ် ဝိုင်းတော်သားများ ဖြစ်ကြသည့် နိုင်ဇော် (လီဒ်) မျိုးဇော် (ကီးဘုတ်) ဂျင်ပိ (ဘေ့စ်) နှင့် မရခိုင် (ဒရမ်)တို့ လာမည့် တနင်္ဂနွေ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကိုရီးယားသို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ၄င်းတို့နှင့် အတူ အဆိုတော် ခင်မောင်တိုး ၊ အယ်လ်လွန်းဝါ ၊ ဟဲလေး ၊ ချစ်သုဝေ ၊ သဇင် ၊ ဂျဲနီ နှင့် ဧည့်အဆိုတော် အဖြစ် ချစ်ဆုဝေ တို့ကလည်း လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 7:38 AM0comments
Labels: လူမှုရေး, ဖျော်ဖြေရေး, ကြေညာချက်, မောင်းသတင်း
မြန်မာ အလုပ်သမား ၂ ဦး အလိုရှိသည်
Incheon Metropolitan City, Juan
အမျိုးသား ၁ ဦး ၊ ညဆိုင်း ချည်းသာ ၊ ထမင်း ၁ နှပ် ၊ ၁၆သိန်း ။
အမျိုးသမီး ၁ ဦး ၊ နေ့ဆိုင်း ချည်းသာ ၊ ထမင်း ၁ နှပ် ၊ ၁၀ သိန်း ။
နေစရာ = မပေးပါ ။
ဗီဇာရှိဖို့မလို ။ ( ရှိလျင်လည်းဖြစ်ပါသည် ။)
မြန်မာ(ရွှေခံ) ရှိသည် ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 7:34 AM0comments
မယူရဘူး ၊ မပူရဘူး ၊ မိဂျင်နီ
မိဂျင်နီ ၊ မကြာခင် မိဂျင်နီတို့ ကိုရီးယားလာကြမယ်ဆိုတာ သိရလို့ ၊ အစ်ကိုကြီး ဝမ်းသာစွာနှင့် စောင့်မျှော်နေတယ် မိဂျင်နီ ။ ညီမလေး မိဂျင်နီ ကိုရီးယားရောက်လာတဲ့အခါ မယူသင့်မယူထိုက်တာတွေ မယူမိစေဖို့နှင့် မပူသင့်မပူထိုက်တာတွေ မပူရစေဖို့ အစ်ကိုကြီး ဒီစာကို ရေးလိုက်ရတာပါ မိဂျင်နီ ။
စကားမစပ် ပြောရဦးမယ် မိဂျင်နီရေ ။ အစ်ကိုကြီး ကိုရီးယားရောက်လာတုန်းက ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အဓိက နိုင်ငံတကာလေဆိပ်က ကင်ပိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကြီး (Kimp’o International Airport) ပါ မိဂျင်နီ ။ အခုမိဂျင်နီတို့ ဆင်းလာကြမယ့် လေဆိပ်ကြီးက ဆောက်လုပ်ဆဲပဲရှိသေး ၊ မဖွင့်သေးပါဘူး ။
ကင်ပို(Kimp’o) လေဆိပ် ရောက်ရောက်ချင်းပဲ ၊ အင်ချွန်း(Incho’n) မှာ နေတဲ့ အသိတစ်ယောက်က လာကြိုပေးပါတယ် ။ အစ်ကိုကြီးက ကျောင်းသားဗီဇာနှင့် ဝင်လာတာပါ ။ နေ့ဖက်ကို ကျောင်းတက်ပြီး ၊ ညဖက် အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ထားတာပေါ့ ။ ဒါနှင့် ညဆိုင်းချည်းပဲ လုပ်လို့ရမယ့် အလုပ်တွေ လိုက်ရှာပါတယ် ။ သူငယ်ချင်းရဲ့ အကူအညီနှင့်ပေါ့ ။
အဲဒီတုန်းက ယူဂျွန်ဘူလို့မြန်မာတွေနှုတ်ကျိုးနေတဲ့ ယူဂျောင်ဘူ(Euijeongbu)မှာ အလုပ်တစ်ခု ပေါ်ပါတယ် ။ အလုပ်သွားဗျူးခဲ့ပါတယ် ။ ယူဂျောင်ဘူမှာ ဆိုပေမယ့် ယူဂျောင်ဘူကနေ ဆက်သွားရတာအဝေးကြီး ၊ ခြေအိတ်စက်ရုံပါ ။ အလုပ်က သက်သာပါရဲ့ ။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက တက်ရမယ့်ကျောင်းက ဆိုးလ်ထဲမှာ ဆိုတော့ ၊ မဖြစ်ပြန်ဘူး ။ အသွားအပြန် ကားပေါ်မှာတင် တစ်နေ့ ၄ နာရီလောက် အချိန်ကုန်မယ့် သဘော ။
ပူချွန်းမှာ လုပ်အားပေး ၂ ရက်
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ။ ပူချွန်း(Puchon)က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက သတင်းရတယ် ။ မြန်မာ (အို) တစ်ယောက် အဖမ်းခံသွားရလို့တဲ့ ။ ပလပ်စတစ် အင်ဂျက်ရှင် ။ ညဆိုင်းချည်းပဲလုပ်ရမှာတဲ့ ။ ဒါနှင့် ကိုယ်ကတော့ သွားမကြည့်ပါဘူး ။ ပူချွန်းဆိုတာ ၊ ကိုယ်တက်မယ့် ကျောင်းနှင့် ဘယ်လောက်ဝေးသလဲပဲလို့ အရင်စုံစမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ် ။ ယူဂျောင်ဘူ နှင့် စာရင်တော့ သိတ်မဝေးတဲ့နေရာပါ ။ အဲဒီမှာ ဝင်လုပ်ဖြစ် ပါတယ် ။ နောက်တော့ ကျောင်းမှာ တွေ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ အကူအညီနှင့် ကုရို (Kuro)မှာ အလုပ်ဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ပူချွန်း(Puchon) မှာတော့ ၂ ရက်ပဲဆင်းပြီး ၊ လစာမယူပဲ ထွက်ခဲ့ပါတယ် ။
အဲဒီအချိန်က စပြီး ၊ အစ်ကိုကြီး ကုရို(Kuro)မှာ မြဲနေတော့တာပါပဲ ။ အစ်ကိုကြီးရဲ့ စက်ရုံရွှေခံက ပူဆန် (Pusan) သင်္ဘောဆိပ်က ခုန်ဆင်းလာတဲ့ သင်္ဘောသားတစ်ဦးပေါ့ ။ ကိုယ်တို့ကတော့ သင်္ဘောသီးကြီး ဆိုပြီး ၊ နာမည်ပြောင်ပေးထားကြတယ် ။ သူကိုရီးယားရောက်ရောက်ချင်း တေဂူးမြို့ (Taegu) မှာ ၆ လလောက် ၊ တေဂျွန်မြို့ (Taejon) မှာ ၂ လလောက် လုပ်လာသေးတယ်တဲ့ ။ သိပ်သဘောကောင်းတဲ့ လူကြီးပါ ။
အဲ ။ ဒီလိုနှင့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ရောက်တော့ ၊ ကားလမ်း လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်တွေ ၊ မြေအောက်ရထား ဘူတာဆိုင်းဘုတ်တွေ နာမည်ပြောင်းတာ သတိထားမိပါတယ် ။ ကျောင်းမှာ ဆရာမကို မေးကြည့်တော့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ကိုရီးယားသုံး အင်္ဂလိပ်စာ (KorngLish) က အသံထွက်သင်္ကေတ (diacritics) တွေ ၊ အပိုစထရော်ဖီ (apostrophes) တွေ သုံးနေရတဲ့အကြောင်း ၊ အဓိကအားဖြင့် အခုပြင်ဆင်လိုက်တာတွေက ဂ (g), ခ (k) နှင့် က (kk) ၊ ဒ (d), ထ (t) နှင့် တ(tt) ၊ ဘ (b), ဖ (p) နှင့် ပ (pp) ၊ ဗျည်းများ ၊ အော (eo) သရ ၊ အု (u) သရ နှင့် အု (eu) (သွားစိပြီးဆိုရ) သရတို့ဖြစ်ကြောင်း အဲတာတွေကို ပြင်ဆင်တာဖြစ်ကြောင်း အကြမ်းဖြင်းရှင်းပြပါတယ် ။
နောက်မှ ကိုယ့်အစီအစဉ်နှင့်ကိုယ်လေ့လာ သိရတာက ၊ ကိုရီးယားအစိုးရက အဲဒါတွေ လိုက်ပြောင်းတာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ (US$ 20 million) ကုန်ခဲ့သတဲ့ ။ ဆိုင်းဘုတ်တွေ စရိတ်လို့ဆိုရမှာပေါ့လေ ။
အင်တာနက် သတင်းများအရသိရတာတွေကတော့ ၊ အဲဒီ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ ပြင်ဆင်လိုက်တာကို ကိုရီးယားဘာသာ ရောမသင်္ကေတ အသုံးစနစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း (Revised Romanization of Korean) လို့ ခေါ်သတဲ့ ။ ကိုရီးယားဘာသာ အမျိုးသားတက္ကသိုလ် (The National Academy of the Korean Language) က ၁၉၉၅ခုနှစ်ကစပြီး ၅ နှစ်ကြာ သုတေသနပြုပြီး ၊ ၂၀၀၀ ပြည့် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့ရောက်မှ ကိုရီးယား ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Culture and Tourism) က အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၀၀-၈ (Proclamation No. 2000-8) ထုတ်ပြန်ပြီး ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာ ။
ကုမ္ပဏီ အမည်ဟောင်းတွေ နေမြဲ
ပုဂ္ဂလိကအမည်တွေ ၊ ကုမ္ပဏီနာမည်တွေကလွဲပြီး ၊ ရပ်ကွက် ၊ မြို့ ၊ ခရိုင် ၊ ပြည်နယ် ၊ တိုင်း ၊ မြို့တော်အမည်တွေ အားလုံး အဲဒီပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း ရေးခဲ့ကြရသတဲ့ ။ ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေကိုတော့ ၂၀၀၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့ရောက်မှ တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သတဲ့ ။ ကိုရီးယားနိုင်ငံက အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ထုတ်ဝေတဲ့ သတင်းစာတွေကတော့ အစိုးရရဲ့ ကြေငြာချက်ကို အမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြီး အန်တုခဲ့ကြသတဲ့ ။ နောက်ဆုံး ကိုရီးယားတိုင်း (The Korea Times) သတင်းစာကြီးကတော့ ၂၀၀၆ခုနှစ် မေလ ရောက်မှ ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့ ရိုမင်အက္ခရာပြင်ဆင်ရေး (Revised Romanization) မူအတိုင်း လိုက်နာ ရေးသားလာခဲ့သတဲ့ဗျ ။
ကိုရီးယားတွေဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အသံဖလှယ်ရေးစနစ်ကို ၁၉၃၃ ခုနှစ်မှစပြီး အမျိုးမျိုး သုံးလာခဲ့ကြသတဲ့ ၊ နောက်ဆုံး ၁၉၈၄ မှ ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်အထိ သုံးလာတဲ့စနစ်ကိုတော့ McCune-Reischauer system လို့ခေါ်သတဲ့ ။
အဲဒီတော့ အစ်ကိုကြီးတို့ ကိုရီးယားရောက် ရှေးမြန်မာတွေ နှုတ်ကျိုးပြီး (တကယ်တော့ ကျိုးတယ်ဆိုတာ အကောင်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဟုတ်ပါ) ပြောနေကြတဲ့ ကုရို (Kuro) ၊ ပူဆန်း (Puson) ၊ ကင်ပိုလေဆိပ် (Kimp’o Airport) ၊ ပူချွန်း (Puchon) ၊ ယူဂျောင်ဘူ (Euijeongbu) ၊ တေဂျွန် (T’aejon) ၊ တေဂူး (T’aegu) ၊ အင်ချွန်းလေဆိပ် (Inchon Airport) ဆိုတာတွေလည်း အရင်စာလုံးပေါင်း မဟုတ်တော့ဘဲ ၊ အခုလို ဖြစ်သွားတော့သတဲ့ -
ကုရို (Guro) ၊
ပူဆန်း (Busan) ၊
ကင်ပိုလေဆိပ် (Gimpo Airport) ၊
ပူချွန်း (Bucheon) ၊
ယူဂျောင်ဘူ (Uijeongbu) ၊
တေဂျွန် (Daejeon) ၊
တေဂူး (Daegu) ၊
အင်ချွန်းလေဆိပ် (Incheon Airport)
ဒီလိုဆိုတော့ ၊ ကိုရီးယား အမည်နှင့် အခေါ်အဝေါ်များကို ခေတ်နှင့်အညီပြောင်းလဲသွားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းများအရ လိုက်ပြောင်းပြီး ပြောကြ ရေးကြတဲ့ မြန်မာအချို့ ရှိလာကြပါတယ် ။ ဒီလိုမျိုးပေါ့ -
ကုရို (Guro) ကို ဂုရို
ပူဆန်း (Busan) ကို ဘူဆန်း
ကင်ပိုလေဆိပ် (Gimpo Airport) ကို ဂင်ဖိုလေဆိပ်
ပူချွန်း (Bucheon) ကို ဘူချောန်း
ယူဂျောင်ဘူ (Uijeongbu) ကို အွိဂျောင်ဘု
တေဂျွန် (Daejeon) ကို ဒေဂျောန်း
တေဂူး (Daegu) ကို ဒေဂူး
အင်ချွန်းလေဆိပ် (Incheon Airport) ကို အင်ချောန်းလေဆိပ်
အထူးသဖြင့်ကတော့ ကိုရီးယားဘာသာကို နားလည်ကြတဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေအဖို့ ပြဿနာမရှိပေမယ့် ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုသာ အခြေပြုပြီး ကိုရီးယား အခေါ်အဝေါ်တွေကို ဖတ်ကြရေးကြတဲ့ မြန်မာတွေအဖို့ မှာတော့ ကိုရီးယားတိုင်း သတင်းစာကြီးက ကိုရီးယားအစိုးရကို အာခံခဲ့သလိုမျိုး ဖြစ်နေတာကို လေ့လာသိရှိရတယ် ။
ညီမလေး အနေနှင့် ဂျောန်း တို့ ချောန်း တို့ကို ဖတ်ရခက်ချင် ခက်နေလိမ့်မယ် ။ သူ့ဖတ်နည်းက ဒီလိုပါ ။ ညီမလေး ငယ်ငယ်တုန်းက ကျူရှင် ပြန်လာပြီး စာကျက်တော့ Bear, Bore , Born ဆိုပြီး ကျက်တာကို မှတ်မိသေးတယ်မဟုတ်လား ။ အဲဒီ Born နေရာမှာ J ထည့်လိုက်တော့ Jorn (Jeon) ဖြစ်သွားပြီး Ch ထည့်လိုက်တော့ Chorn (Cheon) ဖြစ်ရော့ပေါ့ ။ မြန်မာတော်တော်များများက အဲဒီလိုရေးဖို့ ဝန်လေးနေကြပါတယ် ။ မြန်မာရေးထုံး မရှိဘူးဆိုပြီး ငြင်းချင်ကြတဲ့သဘောပေါ့ ။ မြန်မာရေးထုံးမရှိမဟုတ် ရှိပါတယ် ။ ပါဠိဘာသာသုံး မြန်မာစာမှာရှိပါတယ် ။ အဝေရာဟောန္တု ဆိုတာလေ ၊ ဖြန့်ပြီးရေးတော့ အဝေရာဟောန်တုပေါ့ ။ ဖတ်ထုံးကတော့ ဟွန်းတုပေါ့ ။ ဒါက ပါဠိသုံးလေ ။
အခုခေတ်မှာ မြန်မာစာဟာ မြန်မာ နှင့် ပါဠိ နှစ်ဘာသာကို ကိုယ်စားပြုရေးနိုင်ရုံနှင့် လုံလောက်တဲ့ ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူး ညီမလေး ။ နိုင်ငံတကာနှင့် ကူးလူးဆက်ဆံ ရေးသားပြောဆိုနေရတဲ့ ခေတ်ရောက်နေပြီလေ ။ ကမ္ဘာ့ မိသားစုဝင်ဘာသာစကားများကို မြန်မာစာနှင့် ကိုယ်စားပြုရေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် ဆိုတာပြဖို့လိုလာပြီ မဟုတ်လား ။ မြန်မာစာမှာ အဲသလို ရေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဗျည်း ၊ အက္ခရာ အစုံအလင်ရှိနေပါရက်နှင့် ဟိုးအရင် နှစ်ပေါင်း ရာထောင်ချီပြီး ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ ပညာရှင်အချို့ ကန့်သတ်ထားတယ်လို့ ထင်တဲ့ ဘောင်အတွင်း ပိတ်လှောင်ထားသလိုမျိုး ၊ ကိုယ့်အစီအစဉ် နှင့် ကိုယ် မွမ်းကျပ်နေဖို့ မလိုတော့ဘူးလို့ အစ်ကိုကြီးထင်တယ် ။ ရှေးခေတ် ပညာရှိတွေကို စော်ကားခြင်း ၊ တော်လှန်ခြင်း ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း သဘော မဟုတ်ပါဘူး ။
နှောင်းခေတ် လူငယ်တွေက ရှေးခေတ်လူတွေရဲ့ တီထွင်မှုကို ချဲ့ထွင် ၊ အားဖြည့်နေသင့်တယ်လို့ အစ်ကိုကြီး ထင်တယ် ။ မြန်မာစကား ရော ၊ မြန်မာစာပါ နိုင်ငံတကာသုံး ဘာသာစားများနှင့်ထပ်တူ လိုက်လျောညီထွေ ၊ စည်ပင် ဖွံ့ဖြိုး နေသင့်တယ်လို့ ၊ အစ်ကိုကြီး ထင်တယ် ။ စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းနှင့် ရှုပ်ထွေးခြင်းကို သပ်သပ်စီခွဲခြားမြင်သင့်တယ်လို့ ကိုကြီးပြောချင်တယ် ။
ဘယ်သူတွေ ဘာပဲပြောပြော အစ်ကိုကြီးကတော့ “ အများညီညီ မညီညီ ၊ ဤဟာဤ ကျွဲဟာကျွဲ” ဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုင်း “ဟောန် ဟာ ဟောန် ၊ ဟွန်း ဟာဟွန်း” ၊ “ချောန်ဟာချောန် ချွန်းဟာ ချွန်း” လို့ပဲ ဆိုချင်ပါတယ် ။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ အသေမဟုတ်ဘူး ။ ခေတ်စနစ်နှင့် အညီ လိုက်လျောညီထွေ ပြောင်းလဲနေတဲ့ အရာသာဖြစ်တယ် လို့ မှတ်သားရဖူးပါတယ် ။ ခေတ် လူနေမှုစနစ်မှာ အံမဝင်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ၊ ခေတ်နှင့်အညီ မလိုက်နိုင်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဟာ ပြတ်ကျန်နေလိမ့်မယ်လို့ အစ်ကိုကြီး ယုံကြည်တယ် ။
ညီမလေးရဲ့ အက ကို အစ်ကိုကြီး ကြိုက်တယ် ။ မြန်မာလူကြီးအချို့က မြန်မာအကလည်းမဟုတ် ၊ အနောက်တိုင်းအကလည်း မဟုတ်ဆိုပြီး ဝေဖန်သံတွေကိုတော့ ကြားမိပါရဲ့ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစ်ကိုကြီးကတော့ ညီမလေးရဲ့ အကတွေဟာ ခေတ်မီတဲ့ အကလို့ မြင်ပါတယ် ။
ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု ကိုယ်ပိုင်စကား ကိုယ်ပိုင်စာ ဆိုတာရှိလို့လား
ယဉ်ကျေးမှုဆိုရာမှာ ကိုယ်ပိုင် မရှိဘူးတဲ့ ။ စာပေလည်း အပါအဝင်ပေါ့ ။ အင်္ဂလိပ်တွေက မြန်မာစကား မြန်မာစာကို ကြိုက်တော့ ယူရေးကြလိမ့်မပေါ့ ။ မြန်မာအပိုင်ပါ ယူမရေးပါနှင့်လို့ ဘယ်တားလို့ရလိမ့်မလဲနော် ။ အင်္ဂလိပ်တွေဟာကို တို့ မြန်မာတွေ ကြိုက်တော့ရော ယူလိုက်ကြတာပဲ မဟုတ်လား ။ ဘတ်စ် ကား တို့ ၊ ရေဒီယိုတို့လိုမျိုးပေါ့ ။ ကိုရီးယားတွေကတော့ ဘော့စု ၊ ရာဒီအို လို့ ဆိုကြလေရဲ့ ။
ပြောရင်း ၊ ဘယ်ရောက်ကုန်မှန်း မသိတော့ပါဘူး ။
အဓိက အစ်ကိုကြီး ပြောချင်တာကတော့ ၊ ညီမလေး ကိုရီးယားရောက်လာရင် ၊ ညီမလေးနှင့် မိတ်ဆက်ဖို့ လာကြတဲ့ သူတွေ အများကြီး ရှိပါလိမ့်မယ် ။ ခုတောင် အစ်ကိုကြီးဆီ စာရင်းပေးထားသူတွေ တော်တော်ရှိနေပြီ ။ သူတို့ စကားပြောကြတဲ့အခါ ၊ အစ်ကိုကြီး ပြောခဲ့သလို ယူဂျောင်ဘူ ဘက်ကသူတွေလည်း ရှိမယ် ။ ပူချွန်း တို့ ပူဆန်းတို့ တေဂျွန်တို့ဖက်ကလူ တွေလည်းရှိမယ် ။ အဲသလိုလေသံမျိုးပြောလာရင် အော် ၊ သူတို့ပြောနေတဲ့ -
ယူဂျောင်ဘူ ဆိုတာကို အွိဂျောင်ဘူ (Uijeongbu) လို့ နားလည်ပေးပါ။
ပူဆန်းတို့ ၊ ပူချွန်းတို့ဆိုတာကို ဘူဆန် (Busan) ၊ ဘူချောန်း(Bucheon) ဆိုပြီး နားလည်ပေးပါ ။
တေဂျွန်းဆိုတာကိုတော့ ဒေဂျောန်း(Daejon) လို့ နားလည်ပေးပါ ။
အင်ချွန်း(Inchon) ဆိုတာ အင်ချောန်း (Incheon) နှင့် အတူတူပါပဲဆိုတာကိုနားလည်ပေးပါ ။
ညီမလေး မိဂျင်နီကိုယ်တိုင်ကတော့ ၊ ယူဂျောင်ဘူ လို့ ပြောဖို့လိုလာတဲ့အခါ အွိဂျောင်ဘူလို့ ပီပီသသပြောပါ ။ ယူလို့ မပြောမိပါစေနှင့် ၊ မယူမိစေနှင့် ပေါ့ ။ ပူချွန်းတို့ ပူစန်းတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြောဖို့ဆိုဖို့ လိုလာတဲ့အခါ ဘူချောန်း ၊ ဘူဆန်း ဆိုပြီးပြောပါ ။ ပူလို့မပြောမိစေနှင့် ၊ မပူစေနှင့်ပေါ့ ။ ညီမတို့ သီချင်းဆိုရမယ့်နေရာက ဘူချောန်းမြို့ မှာရှိတာပါ ။
အခုအစ်ကိုကြီးက ညီမလေးကို တားဆီးနေတာ ၊ အမိန့်ပေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အဲဒီလို လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်းအ စ်ကိုကြီးမှာမရှိပါဘူး ။ ဆိုင်သာဆိုင် မပိုင်တဲ့ အစ်ကိုကြီးပါ ။ ဒီတော့ ၊ ကိုကြီးရေ မီးကတော့ ယူမှဖြစ်မယ် ၊ ပူမှဖြစ်မယ် ဆိုလည်း ၊ မယ်မင်းကြီးမ သဘောတော်အတိုင်း ယူချင်သလိုသာ ယူ ၊ ပူချင်သလိုသာ ပူတော်မူပါ ။
ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ၊ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ အကုန်အကျခံပြီး ၊ ပြင်ထားတာတွေဟာ မဟန်သေးဘူးလို့ဆိုပြီး ၊ လီမြောင်ဘတ်အစိုးရက ကိုရီးယားသုံး အင်္ဂလိပ်စာလုံးများကို လာမယ့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မှာ ထပ်ပြင်ဦးမလို့တဲ့ ။ နိုင်ငံတကာမှာ လက်စောင်းထက်နေတဲ့ ကိုရီးယား စာရေးဆရာအချို့က ရေးသားနေတဲ့ ကိုရီးယားသုံးအင်္ဂလိပ်က တစ်မျိုးဖြစ်နေပြီး ၊ နိုင်ငံတကာက လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ကိုရီးယားသုံး အင်္ဂလိပ်စာအပေါ် နားလည်မှုလွှဲနေကြတာဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ နိုင်ငံတကာ ယှဉ်ပြိုင်စွမ်းအား (country's global competitiveness) ကို လျော့နည်းစေလို့ဖြစ်ပါသတဲ့ ညီမလေးရေ ။
အော် ၊ စကားမစပ် ပြောစရာ ပေါ်လာလို့ ပြောလိုက်ရဦးမယ် ။ ပြည်တွင်းကထုတ်တဲ့ မီဒီယာတွေမှာ ၊ တည်ဆောက်နေဆဲ ကိုရီးယားနိုင်ငံမြို့တော် အသစ် Sejong ကို ဆီဂျောင်း ဆိုပြီး ရေးနေကြတာတွေ့တယ် ။ အဲဒီ ကိုရီးယားအသံ(စကား) အမှန်က ဆီဂျောင်း မဟုတ်ဘူး ၊ ဆယ်ဂျုံ ဖြစ်မှ အနီးစပ်ဆုံးမှန်တယ် ။ ညီမလေးတို့ တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီကိစ္စလေးလည်း အမှန်အတိုင်း ဖြစ်အောင်လုပ်ကြဦး ။ တော်ကြာ အဲဒီ ဆီဂျောင်းကြီး အတည်ဖြစ်သွားဦးမယ် ။ နောက်မှ လိုက်ပြင်ရတာ ခက်တတ်တယ် ။
စာလည်း အတော်ရှည်သွားပြီ ။ နားလိုက်ဦးမယ်။
၁၉ ရက်နေ့ အင်ချောန်းလေဆိပ်မှာ အစ်ကိုကြီး လာစောင့်နေမယ် ။ အဲဒီတော့မှ မမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ညီမလေးကို တဝကြီး ကြည့်ရဦးမယ် ။
အစ်ကိုကြီးပြောတာတွေ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ၊ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ လိပ်စာတွေမှာ အသေးစိတ် ဆက်ပြီး လေ့လာလို့ရပါတယ် -
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 7:36 AM 1 comments
Labels: ဗဟုသုတ, ဘာသာစကား, သတင်းဖတ်စာ, အယူအဆ, ဆောင်းပါး
ချူးဆောက်ပွဲတော်ကာလ စုပေါင်းဒုလ္လဘရဟန်းခံပွဲ ကျင်းပမည်
ဓမ္မဒူတဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း(ကိုရီးယား) အနေဖြင့် ၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ချူးဆောက်ပိတ်ရက် ကာလ အတွင်း စတုတ္ထအကြိမ် စုပေါင်းဒုလ္လဘ ရဟန်းခံပွဲ ကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည် -
- ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်္ဘာလ ၂၂ ၊ ညနေ ကိုရင်ကြီးဝတ် ။
- ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်္ဘာလ ၂၃ သိမ်ဝင် ၊ ရဟန်းတက် ။
မြိတ်အသင်း (ကိုရီးယား) က ရဟန်းဒါယကာ ဒါယိကာမများ အဖြစ် ချီးမြှောက် ထောက်ပံ့ လှူဒါန်းကြမည်ဖြစ်ပြီး ၊ လောလောဆယ် ရဟန်းလောင်း ၁၀ ပါးရရှိထားပါသည် ။
ဒုလ္လဘ ရဟန်းခံလိုသူ သို့မဟုတ် ရဟန်း ဒါယကာ ရဟန်းဒါယိကာမများအဖြစ် ပါရမီ ဖြည့်ဆည်းလိုသူများ ၊ ဓမ္မဒူတဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း(ကိုရီးယား) (ဖုန်းနံပါတ် ၀၃၂ - ၅၂၁ - ၅၅၈၆) သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ။
Posted by ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) at 10:37 PM0comments
ရေးသားသူ — မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော်
ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် ရွှေညီအစ်ကိုအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ လာမည့် ချူစုတ်ပိတ်ရက်များ တွင် (မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော်၌)
ပထမနေ့ (၂၁-၉-၂၀၁၀) အင်္ဂါနေ့တွင် ကိုဘိုဘိုဇော် နှင့် သူငယ်ချင်းများ ဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော် အရှင်မြတ်တို့အား အရုဏ်ဆွမ်း
နေ့ဆွမ်း နှင့် ကြွရောက်လာသောမိတ်ဆွေ တို့အား မြန်မာ ထမင်းဟင်းတို့ဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးပါမည်။
ဒုတိယနေ့ (၂၂-၉-၂၀၁၀) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြင်းခြံ ရွှေညီအစ်ကို မောင်နှမ တို့မှ ဘုရားအမှူးရှိသောသံဃာတော်
အရှင်မြတ်တို့အား အရုဏ်ဆွမ်း နေ့ဆွမ်း နှင့် ကြွရောက်လာသော မိတ်ဆွေ တို့အား မြန်မာ ထမင်းဟင်းတိုဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးပါမည်။
တတိယနေ့ (၂၃-၉-၂၀၁၀) ကြာသာပတေးနေ့ တွင် ဝှါဆောင်းဂုန်ဂျို(ASAN)မှ စောနို ညီအစ်တို့မှ ဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော်
အရှင်မြတ်တို့အား အရုဏ်ဆွမ်း နေ့ဆွမ်း နှင့် ကြွရောက်လာသော မိတ်ဆွေ တို့အား နံနက် မုန့်ဟင်းခါး နှင့် နေလည် ထောပတ်ထမင်း
ုတို့ဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေး မည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ကြွရောက်ကြပါရန် ရွှေမြန်မာတို့အား လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်သည်။
Posted by မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် at 1:13 PM0comments
ရေးသားသူ — မြန်မာအသင်း(ကိုးရီးယား)
မြန်မာအသင်း(ကိုးရီးယား)၏ နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော တိလောကမုနိ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်
နေ့ ရက်။ ။ ၂၂ .၉.၂၀၁၀
အချိန်။ ။ နေ့ လည် ၁၂ နာရီမှ ညနေ၄ နာရီအထိ
နေရာ။ ။ပူချွန်းမြို့ဆော့ဂွမ်ဆာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတော်
ဖျော်ဖြေရေး ။ ။ RAINBOW ၊ ပြဇာတ် ၊ သီချင်းအဆိုပြိုင်ပွဲ
* သီချင်းအဆိုပြိုင်ပွဲ အတွက် မည်သူမဆိုမိမိနှစ်သက်သည့် သီချင်း တပုဒ်ဖြင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး အကောင်းဆုံး ဆုနှစ်ဆုအတွက် ဆုကြေးချီးမြင့်မည် ။
ပြိုင်ပွဲဝင်ဦးရေ (၁၀) ယောက်သာသတ်မှတ်ထားပြီး အရင်ဆုံးစာရင်းပေးသူများကို ဦးစားပေးမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အမြန်ဆုံးစာရင်းပေးသွင်းရန်
ကိုမျိုးဇော်..၀၁၀ ၇၉၃၉ ၇၃၅၅
ကိုစိုင်း ..၀၁၀ ၉၉၂၄ ၁၄၇၆
ကိုလုံးလုံး..၀၁၀ ၇၅၇၈ ၅၂၅၄
ကိုဖြိုး ..၀၁၀ ၃၉၃၆ ၉၉၇၆
Posted by မောင်ကောက်ရိုး at 11:03 AM0comments
ရေးသားသူ — မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော်
ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် ရွှေညီအစ်ကိုအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ ကျွန်တော်များ အင်းချွန်း နန်ဒေါင်းညီအစ်ကို ငါးယောက်မှ စုပေါင်း၍ လာမည် (၁၉-၉-၂၀၁၀)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော်အတွင်၌ ဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော်အရှင်းမြတ်တို့အား အရုဏ်ဆွမ်း- နေ့ဆွမ်း အစရှိသော လှူဒါန်းဖွယ်ရာ အဖြာဖြာတို့ကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း ကြွရောက်လာသော မိတ်ဆွေတို့အား နံနက်မလေးရှားခေါက်ဆွဲကြော်နှင့် နေ့လည် မြန်မာထမင်းဟင်းတို့ဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်း ပရိတ်တရားတော်များ နားကြားခြင်းစသော ကုသိုလ်ကောင်းမှု တို့ကိုပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသောကြောင့်အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကြွရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်သည်။
အချိ်န်~~~~~~နံနက် (၆ နာရီမှ နေ့လည် ၃ နာရီထိ )
ဧည့်ခံကျွေးမွေး~~~~~~နံနက် မလေးရှားခေါက်ဆွဲကြော်နှင့် နေ့လည်မြန်မာ ထမင်းဟင်း
Posted by မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် at 9:59 AM0comments
အပိုဒ် (၉) အင်တာနက် ကုမ္ပဏီများ (Internet providers) ကလည်း အစိုးရများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းများ နှင့် တတိယအဖွဲ့အစည်းများ (Third parties) သို့ အင်တာနက် အသုံးပြုသူများ ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို သူတို့၏ အလိုဆန္ဒမပါဘဲ မပေးပို့သင့်ပေ ။
အပိုဒ် (၁၁) အင်တာနက် လွတ်လပ်ခွင့် ကြေငြာစာတမ်းပါ အခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များသည် အကျိုးအကြောင်းဆီလျှော်သော ကန့်သတ်ချက်များဖြင့်သာ ခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းတို့ကို လွတ်လပ်၍ ဒီမိုကရေစီဆန်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာသာ အထင်အရှား အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ဖြစ်သည် ။ ယင်းအင်တာနက် လွတ်လပ်ခွင့် ကြေငြာစာတမ်းတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်းပါ အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ မပါဝင်ပါ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 7:11 PM0comments
Labels: မျှဝေခြင်း, အင်တာနက်, ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်း, ဆောင်းပါး, မောင်းသတင်း
ဗီဇာလျှောက်ထားဖို့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းမလုံလောက်တဲ့ ပြဿနာများ
- ပတ်စပို့က သက်တမ်း ၁၀ လလောက်ကျန်သေးတယ် ။ အဲဒါ ဗီဇာသွားတိုးရင် ပြဿနာဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင် ။
- မြန်မာသံရုံးကထုတ်ပေးတဲ့ ပတ်စပို့စာအုပ်အသစ်မှာ ကိုရီးယား အဝင်ဗီဇာ မရှိတော့ ဗီဇာသွားတိုးရင် ပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးလား ။
အဲဒီမေးခွန်းတွေ မဖြေခင် ၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ကျနော့်အတွေ့အကြုံလေး အရင် မျှလိုက်ချင်ပါတယ် ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ကိုရီးယားအစိုးရက ဗီဇာရက်ကျော်နေသူတွေကို တရားဝင်နေသူများအဖြစ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အစီအစဉ် (Legalization Program) တစ်ခု ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီမှာ ကျနော်လည်း တရားဝင်ဗီဇာ တိုးခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။ ဗီဇာလျှောက်ကြတဲ့သူတွေများလွန်းလို့ ကိုရီးယားလဝက က အထူးဌာနတွေဖွင့်ပြီး လုပ်ပေးခဲ့တာပါ ။ မနက် ၅နာရီလောက် အရောက်သွားပြီး တန်းစီကြရတာပါ ။ အဲဒါတောင် နေ့လည် ထမင်းစားပြီးချိန်လောက်မှ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်တာပါ ။ နောက်ကျသူများကတော့ တစ်နေ့လုံး နေပူခံတန်းစီပြီး ၊ ရုံးချိန်ကုန်လို့ ဗီဇာမရပဲ နောက်နေ့ကူးပြီး ၊ မနက်စောစော ထပ်ပြီး တန်းစီကြရတဲ့အခြေအနေပါ ။
အဲဒီအတိုင်းပဲ မနက် ၅ နာရီလောက်သွားပြီး တန်းစီခဲ့တဲ့ ကျနော့်ခင်ဗျာ ၊ နေ့လည် ၂နာရီလောက်မှာ အလှည့် ရောက်ပါတယ် ။ လဝက အရာရှိက ကျနော့်စာအုပ်သက်တမ်းကို တွက်ကြည့်ပြီး ၊ သက်တမ်းလိုနေတယ် ၊ သက်တမ်းတိုးပြီးမှ ပြန်လာပါဆိုပြီး ၊ ပြန်လွှတ်ပါတယ် ။ ကျနော့် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်သက်တမ်းက ၁၁ လ လောက်ကျန်နေပါသေးတယ် ။ ဘယ်လိုမှ အသနားခံလို့မရပါဘူး ၊ မနက် ၄နာရီလောက်က လာပြီးတန်းစီခဲ့တာပါလို့ ပြောလည်း မရပါဘူး ။ တန်းစီတာ မစီတာ ၊ သူ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဲ့ ။ ဗီဇာရပြီးရင် ချက်ချင်းသွားတိုးမှာပါလို့ ပြောလည်း မရပါဘူး ။ စာအုပ်သက်တမ်းရှိသလောက်ပဲပေးပါပြောလည်းမရပါဘူး ။ မြန်မြန်ထွက်သွားပါတဲ့ ၊ မင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ ။ ကဲ ၊ ခံစားကြည့်ကြပေတော့ဗျာ ။
ကျနော်လည်း မကျေနပ်ပါဘူး ။ နောက်ထပ် ကောင်တာ ၄ ခုရှိပါသေးတယ် ။ ဒါနှင့် ကျနော်လည်း လဝက အရာရှိများသဘောထား လေ့လာရေး လုပ်ရပါတော့တယ် ။ အစစ်အဆေးအမေးမြန်းနည်းပြီး ၊ သွက်သွက် လက်လက် ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် လုပ်နေတာတွေ့ရတဲ့ အရာရှိဆီမှာ ပြန်ပြီးတန်းစီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ။ နောက်ဆုံးက တန်းပြန်စီရရင်တော့ အဲဒီနေ့ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်ဖို့ မမြင်ပါ ။ ကြားဖြတ်တိုးပြီးတန်းစီရင်လည်း ဝိုင်းအော်ကြ ၊ ရန်ရှာကြလုပ်ကြမှာပါ ။ နောက် လုံခြုံရေးလည်း ရှိနေပါတယ် ။ အဲဒါနှင့် မြန်မာတစ်ယောက် ရှာပြီး ဘေးကနေ စကားတပြောပြောနှင့် မိတ်ဖွဲ့ရင်း ကပ်လိုက်ခဲ့ရပါတယ် ။ စိတ်ထဲကရော ပါးစပ်ကရော ဆိုလိုက် ရွတ်လိုက်ရတဲ့ ဘုရားတရားစာတွေလည်း အစုံအစေ့ပေါ့ဗျာ ။
အဲသလိုနှင့် ကျနော့် အလှည့်ရောက်တော့ ၊ လဝကအရာရှိက ပြီးရင်စာအုပ်သက်တမ်းအမြန်သွားတိုးပါလို့သာ မိန့်ခွန်းခြွေလိုက်ပြီး ၊ ဒုံးကနဲ ထု ၊ လက်မှတ်ထိုး ၊ ဘေးမသီရန်မခ ၊ ဗီဇာ ရလိုက်သဗျ ။
ဗီဇာလျှောက်ထားဖို့ နိုင်ငံကူးစာအုပ်သက်တမ်းဘယ်လောက်လိုသလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျနော် ပြောချင်တာက ၊ အဲဒါပါပဲခင်ဗျာ ။ ကိုယ်လျှောက်ထားမယ့် ဗီဇာသက်တမ်းနှင့် လုံလောက်တဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်း ရှိဖို့လိုပါတယ် ။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းထက်ပိုတဲ့ ဗီဇာကို ခြွင်းချက် အနေနှင့်ရနိုင်ပေမယ့် ၊ ရလိုရငြား မမျှော်လင့်ကောင်းပါဘူးလို့ ဆိုချင်ပါတယ် ။
မြန်မာသံရုံးကထုတ်ပေးတဲ့ ပတ်စပို့စာအုပ်အသစ်မှာ ကိုရီးယား အဝင်ဗီဇာ မရှိတော့ ဗီဇာသွားတိုးရင် ပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးလား ။ ဘာပြဿမျှ မရှိပါ ။ မြန်မာသံရုံး (ဆိုးလ်) ဟာ ကိုရီးယားနိုင်ငံ အတွင်းမှာရှိနေတာမို့ ၊ ဒီသံရုံးမှာ စာအုပ်လျှောက်ထားဖို့ ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းဝင်လာပြီးမှ လျှောက်ထားလို့ ရမှာမဟုတ်ဘူးလား ။ လူကြီးမင်းဟာ ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ တရားဝင်ဝင်လာသလား ၊ ဗီဇာရှိသလားဆိုတာကိုတော့ လူကြီးမင်းရဲ့ အမည်နှင့် မွေးရက်ကို သက်ဆိုင်ရာအရာရှိက သက်ဆိုင်ရာ ကွန်ပြူတာမှာ ရိုက်ရှာ ကြည့်လိုက်တာနှင့် ချက်ချင်းသိနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 2:39 PM0comments
Labels: ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်း, ဆောင်းပါး, မောင်းသတင်း
ချူးဆောက်ပိတ်ရက် Lazy Club အထူးဂီတပွဲ ပျက်ပြီ ဟူသော ကောလာဟလ သတင်း
လာမည့် ကိုရီးယား ချူးဆောက်ပွဲတော် ပိတ်ရက် ကာလအတွင်း ဘူချောန်းမြို့တေ် ပြည့်သူ့ခမ်းမ (Bucheon Citizen Hall) တွင်ကျင်းပမည့် အထူးဂီတပွဲတော်အတွက် ပျက်ပြီ ၊ လက်မှတ်ခများ ပြန်အမ်းနေပြီ ဟူသော ကောလာဟလသတင်းများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိရာ ၊ အဆိုပါ သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီက မဟုတ်မှန်ကြောင်း ငြ်းဆိုလိုက်ပြီး ၊ မူလကြေငြာထားသည့်အတိုင်း ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ အပြောင်းအလဲဘာတစ်ခုမျှမရှိကြောင်း ၊ လက်ကျန်ရုံဝင်လက်မှတ်များကို တစ်စောင်လျင် ဝမ် ၅ သောင်းနှုန်းဖြင့် အောက်ပါ တစ်နေရာတည်းတွင်သာ ရောင်းချပေးနေကြောင်း သိရသည် -
- မြန်မာသူကြီး (ဘူဖြောင်း) 010-8330-1792
အဆိုတော်များနှင့် Lazy Club Band မှ ဂီတဆရာများ စက်တင်္ဘလာ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကိုရီးယားသို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ အဆိုတော်များရောက်ရှိမည့် စက်တင်္ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှ ပွဲတော် ကျင်းပချိန်ထိ လက်မှတ်တစ်စောင်လျင် ဝမ် ၆ သောင်းနှုန်းဖြင့် တိုးမြှင့် ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ နှင့် ဂီတပွဲတော်မှ ရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်များကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားပြန့်ပွါးရေးဆောင်ရွက်နေကြသည့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ ခွဲဝေလှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီက ထပ်မံ အတည်ပြုပြောဆိုသည် ။
ကောလဟလသတင်းများကို မည်သူက မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ထုတ်လွင့်နေသည်ကို မိမိတို့ မသိကြောင်းနှင့် နောင်တွင် အဆိုပါ ဂီတပွဲတော်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမှန်များ စဉ်ဆက်မပြတ်သိရှိလိုပါက 010-4626-7571, 011-9360-1792, 010-9086-2290, 010-2331-2457 နှင့် 010-8330-1792 တို့ထံ မေးမြန်းနိုင်ကြောင်း ပွဲတော်ကျင်းရေးကော်မတီကပြောသည် ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 9:08 AM0comments
Labels: ဘာသာရေး, သတင်းဖတ်စာ, ဖျော်ဖြေရေး, မောင်းသတင်း
2010 이주민 어울림 한마당
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာဂျိုဂေးဆာ မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော (၈) နိုင်ငံ
ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ ရွှေမြန်မာ ညီအစ်ကို အပေါင်းတို့ခင်ဗျာ လာမည့် (၂၀၁၀-၁၀-၁၀)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် (ဆိုးလ်မြို့ ဂွန်းဂျင်းဂူ ဆိုဂျဲရှိ ဆောန်နွှာ ယယ်ဆူလ် အထက်တန်းကျောင်းဝင်း)အတွင်း၌ (၈) နိုင်ငံ အားကစားစုံညီပွဲတော် ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသောကြောင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များထံသို့ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်၊
(မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော်သို့နံနက် ၈ နာရီ
အရောက် ကားအကြိုအပို့ စီစဉ်ပေးမည်)
ကျင်းပမည့်နေရာ~~~~ 선화 예술고등학교 ( 서울시 광진구 소재 )
ကျင်းပမည့်အားကစား~~~~ဘောလုံးပွဲ ၊ လွန်ဆွဲပွဲ ၊ မီတာ ၄၀၀ အပြေး ၊ ဝါလုံးတိုင် ထိပ်ရှိ ခြင်းထဲသို့
ဘောလုံးပစ်ထည့်ပွဲ ၊ဘောလုံး ပစ်ဖောက်ခြင်း ( သို့ ) ဘောလီဘော
ပါဝင်မည်နိုင်ငံ ~~~~ ရှစ်နိုင်ငံ
နေ့လည်စာကျွေးမည် ၊ လက်ဆောင်ပေးမည် ၊ သွားအခမဲ့ကုသပေးမည် ၊ ငွေလဲ ပေးမည် ၊(ဒေါ်လာ)
စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များ 032 5112841-010 23272457 -010 94194243 -010 57800862
Posted by မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် at 7:29 PM0comments
Labels: ကျန်းမာရေး, ဖိတ်စာ, လူမှုရေး, အားကစား, မောင်းသတင်း
နာရေး ဆွမ်းအလှူ ဖိတ်ကြားလွှာ
၂၀၁၀ပြည့်နှစ် သြဂုတ်လ ၂၀ ရက် ညနေပိုင်းက ဖြောင်းထက်မြို့တွင် ကွယ်လွန်သွားသည့် ကိုသောင်းလှ (ခေါ်) ကိုကောင်းဇော် (အသက် ၃၅ နှစ်) အားရည်စူး၍ ၊ မြတ်စွာဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်သူတို့အား ဆွမ်းအာဟာရနှင့် လှူဖွယ်ဝတ္ထုအစုစုတို့ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီးလျင် ၊ လူကြီးမင်းတို့နှင့်အတူ သာဓုအနုမောဒနာဒါန ပြုလိုပါသဖြင့် ၊ အခမ်းအနားသို့ ကြွရောက်တော်မူပါရန် ရိုသေလေးမြတ်စွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် ။
အခမ်းအနား အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
-၂၀၁၀ပြည့်ုနှစ် စက်တင်္ဘာလ ၁၉ ရက် (တနင်္ဂနွေ)
-နံနက်(၇)နာရီ မှ နေ့လည်(၂) နာရီခွဲ အထိ။
Posted by ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) at 7:53 AM0comments
Labels: နာရေး, ဖိတ်စာ, သာဓုအနုမောဒနာ, မောင်းသတင်း
မြန်မာသစ်တောဝန်ကြီး (သို့မဟုတ်) အစိုးရအရာရှိများဖြင့် အဆက်အသွယ်ရှိသူများ အလိုရှိသည်
ကိုရီးယား သစ်လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုက မြန်မာသစ်တောရေးရာဌာန ၀န်ကြီး အစရှိသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်း (သို့) အစိုးရအရာရှိများဖြင့် အဆက်အသွယ်ရှိ သို့မဟုတ် ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး ကိုရီးယားစကား ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်သူ မြန်မာ ၃ ဦးအား ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အနည်းဆုံးလုပ်ခဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားလိုကြောင်း သိရှိရပါသည် ။ စိတ်ပါဝင်စားသူများ ဖတ်ရှု သိရှိ လျှောက်ထားနိုင်ကြရန် လက်ဆင့်ကမ်း ကြော်ငြာလိုက်ပါသည် ။
사장님채용하셨으면 하는 미얀마인의 채용조건은 다음과 같습니다.
အလုပ်လျှောက်ထားရန်အတွက် အလုပ်ရှင်က အလိုရှိသော မြန်မာလူမျိုး အလုပ်လျှောက်ထားသူ၏ အရည်အချင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် ။
1. 양곤외국대학 한국어학과 졸업자
၁။ ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှ ကိုရီးယားဘာသာ အထူးပြုဖြင့် ဘွဲ့ရထားသူ
2. 한국어 능력시험 5급이상 취득자
၂။ ကိုရီးယားအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ(TOPIK) ကို level5နှင့် အထက် အောင်မြင်ထားသူ
3. 영어 토플 (혹은 그와 상으하는 다른 종류의 시험 포함)시험 550점이상
၃။ TOEFL (သို့မဟုတ် ထိုစာမေးပွဲနှင့် အဆင့်ညီမျှသော စာမေးပွဲ)ကို အမှတ် ၅၅၀နှင့်အထက်ဖြင့် အောင်မြင်ထားသူ
4. 미얀마 산림부 장관 등 정부관료와 인적 네트워크가 형성된 자
၅။ မြန်မာသစ်တောရေးရာဌာန ၀န်ကြီး အစရှိသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်း (သို့) အစိုးရအရာရှိများဖြင့်
5. 체용과 동시에 한국과 미얀마를 왕복하며 미얀마 산림개발 업무를 수행할 수 있는자
၅။ အလုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် မြန်မာနှင့် ကိုရီးယားအားကူးသန်းသွားလာ၍မြန်မာ့သစ်တော ဖော်ထုတ်ရေးတာဝန်အား ထမ်းဆောင်နိုင်သောသူ
6. 체용과 동시에 한국과 미얀마를 왕복하면서 목재관련 제조업무을 수행할 수 있는자
(즉, 미얀마에서 원목벌체 후 1차 가공을 하고, 한국에서 정밀가공업무를 수행할수 있는자)
၆။ အလုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် မြန်မာနှင့် ကိုရီးယားအား ကူးသန်းသွားလာ၍ သစ်ကုန် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များအား ထမ်းဆောင်နိုင်သူ (သို့) မြန်မာတွင် သစ်ခုတ်လုပ်ငန်း အပြီး
သစ်အချောကိုင်လုပ်ငန်း အဆင့် (တစ်) အား တာဝန်ယူအပြီး ၊ ကိုရီးယားတွင်
သစ်အချောထည်လုပ်ငန်းတာဝန်အား ဆက်လက် ထမ်းဆောင်နိုင်သူ
7. 체용 예정인원 3명
၇။ ခန့်ထားရန် လျာထားသူ ဦးရေ - ၃ ဦး
8. 체용 조건: 대한민국 노동법에 의한 체저 보수 적용 및 4대보험 보장
၈။ အလုပ်ခံစားခွင့် - ကိုရီးယားနိုင်ငံ အလုပ်သမားအက်ဥပဒေအရ ခံစားနိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံး လစာငွေနှင့် အခြေခံအာမခံစနစ် လေးခုအား ပေးသွင်းခြင်းကို တာဝန်ယူပါမည်။
춘천 인텔우드 취업을 희망하시는 분들께 다시한번 전송해주시길 바랍니다.
Chaue Chaung Intel Wood တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုသူများအား လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဝေပေးကြပါရန်။
inkyky@hanmail.net , ymhein@gmail.com 으로 이력서 보내시고, 꼭! 근무 가능일과 연락처를 기입하세요!
အလုပ်လျှောက်လွှာအား inkyky@hanmail.net, ymhein@gmail.com သို့ ပို့ပေးကြပါရန်နှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သော နေ့ရက်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာအား သေချာစွာ ရေးသားပေးကြပါရန် ။
ဤသတင်းကို (ဤနေရာ) မှ ရရှိပါသည် ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 6:53 AM4comments
Labels: အလုပ်ခွင်ရေးရာ, အလုပ်ကြော်ငြာ, ကြေညာချက်, မောင်းသတင်း
ကိုအောင်မျိုးရဲ့ မေးခွန်းအတွက် ၊ အောက်ပါဆောင်းပါးများကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုစေလိုပါသည် -
- အလုပ်စာချုပ်သက်တမ်း မပြည့်သေးဘဲ ဗီဇာကုန်သွားလျင် ဒီလိုလုပ်ဗျာ (Tuesday, August 24, 2010 ) နှင့်
- မြန်မာအလုပ်သမားများ အလုပ်စာချုပ်သက်တမ်းနှင့် ဗီဇာသက်တမ်း ခြားနားနေသည့် ပြဿနာများ (Thursday, June 10, 2010)
အဆိုပါ ဆောင်းပါးများ ရှာမတွေ့လျင် ၊ ဤ ဘလော့စာမျက်နှာ အောက်ဆုံး ညာဖက်ခြမ်း တွင်ရှိသော “Older Posts” စာသားကို နှိပ်လိုက်ပြီး ကိုအောင်မျိုးရှာလိုသည့် ဆောင်းပါး (ရက်စွဲ) မရောက်မချင်း တစ်မျက်နှာချင်း ဆက်တိုက်နှိပ်သွား လို့ရပါသည် ။
နောက်တစ်နည်းမှာ ဤဘလော့စာမျက်နှာ ညာဖက်ဘေးရှိ “ မျိုးတူစု” ဟူသော စာပိုဒ်အောက်ရှိ ၊ ဥပဒေနှင့် ဆောင်းပါးဟူသော Menu ကို နှိပ်လိုက်ပြီး အထက်က ပြောထားသလို မတွေ့မချင်း တစ်ခုချင်း လိုက်ရှာလို့လည်း ရနိုင်ပါသည် ။
အလုပ်သမားရုံး(နိုဒုံဘု)ကိစ္စနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံး(ဗီဇာ)ကိစ္စ ကို မရောထွေးစေလိုပါ ။
အဆင်မပြေလျင် ၊ 010 2331 2457 သို့ ခေါ်လိုက်ပါ ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 8:42 AM0comments
Labels: ဟန်းဂုရွာစာတိုက်, ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်း, ဆောင်းပါး, မောင်းသတင်း
လွန်ခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ (September 5, 2010) ဘူဖြောင်းမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကျနော်များ စကားဝါစားတော်ဆက် (Sagawar Restaurant) ဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်ပြီး စိတ်ဓါတ်ခွန်အား ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြသည့် မိတ်သင်္ဂဟအပေါင်းတို့အား အထူးလှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ဟန်းဂုရွာမှတစ်ဆင့် အမှာစကား ပါးလိုက်ပါသည် ခင်ဗျား ။
၂၀၁၀ပြည့်နှစ် စက်တင်္ဘာ ၇
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 8:13 AM0comments
Labels: ဖတ်စရာ, လူမှုရေး, ကျေးဇူးတင်လွှာ, မောင်းသတင်း
ဘူချောန်းဒေသ မြန်မာတို့အတွက် အလုပ်ခွင်ဆိုင်ရာ ပညာပေးသင်တန်း အောင်မြင်စွာ ပြီးစီး
ယမန်နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီမှ ညနေ ၇ နာရီခွဲ အချိန်ထိ ဘူချောန်း နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများရိပ်သာ တွင် ၊ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဘူချောန်းဒေသ မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် အလုပ်ခွင်ဆိုင်ရာ ပညာပေးသင်တန်းသို့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ တက်ရောက်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားစွာ လေ့လာမှတ်သားခဲ့ကြကြောင်း ၊ မြန်မာအသင်း (ကိုရီးယား) ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ ၊ ကိုရီးယား အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် ၊ ကိုရီးယားအလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (ဘူချောန်းဒေသခွဲ) နှင့် ဘူချောန်းနိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများရိပ်သာတို့က အဆိုပါ သင်တန်းကို ပူးတွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 8:06 AM0comments
Labels: ကျန်းမာရေး, မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ, အလုပ်ခွင်ရေးရာ, မောင်းသတင်း
မြန်မာအလုပ်သမား ၁ ဦးအလိုရှိသည်
အကိုဝိုင်းခင်ဗျာ .. bucheon ,wommi gu နားက ပလပ်စတစ်အင်ဂျက်ရှင်း စက်ရုံတရုံမှာ ဗီဇာမရှိတဲ. အလုပ်သမားတဦးလိုနေပါတယ် ။
ညဆိုင်းသက်သက် ၊ စနေပျောက် ( စနေနေ.ဆိုင်း နေ.၀က်ဆင်းပေးရမည်) ၊နေစရာမပေး
ထမင်းတနပ် ၊ လစာအတိအကျပေး ၊ညဆိုင်း ကိုရီးယား ၊တခြားနိုင်ငံသားမရှိ ၊အလုပ်သက်သာ ။အလုပ်ကောင်း
လစာ - ၁၃သိန်းခွဲ (စနေညဆိုင်းလေးပတ်ဆင်းရလျှင် ၁၅သိန်း၃သောင်း)
ဆက်သွယ်ရန် - 010 -7218 -8512
ဟန်းဂုရွာမှာ အဆင်ပြေရင် ထည်.ပေးပါဦးခင်ဗျာ ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 7:33 AM0comments
Labels: ဟန်းဂုရွာစာတိုက်, အလုပ်ကြော်ငြာ, မောင်းသတင်း
ပိတ်ရက်ကြီးအတွင်း ဗီဇာကုန်လျင် ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
အခုလာမယ့် ချူးဆောက် ပိတ်ရက်ကြီး (စက်တင်္ဘာ ၂၁ ၊ ၂၂ ၊ ၂၃ ရက်များ) အတွင်း ဗီဇာကုန်မယ့် ညီငယ်တွေ အတော်များများရှိမယ့်ပုံရတယ် ။ ပိတ်ရက်ကြီးအတွင်း ဗီဇာကုန်လျင် ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ။
အဲဒီနေ့မှာ အလုပ်သမားရုံး (ဂိုယုံဂျိဝေါန်ဆင်ထော်) ဖွင့်ပါ့မလား ၊ လဝကရုံးဖွင့်ပါ့မလား ဆိုပြီး မေးကြတဲ့ ညီငယ်တွေ မနည်းမနော ပါပဲဗျာ ။
ချူးဆောက်အတွင်း စာချုပ်သက်တမ်းကုန်မှာမို့ ၊ စာချုပ် သက်တမ်းပြည့်အောင် ၊ ပိတ်ရက် ပြီးမှ အစားပြန်ဆင်းပေးရမှာလားဆိုပြီး မေးတဲ့ညီငယ်လည်း ရှိရဲ့ ။
ချူးဆောက်အတွင်း စာချုပ်သက်တမ်းကုန်မယ့်ညီငယ်များ ၊ ပိတ်ရက်မတိုင်ခင် နောက်ဆုံးရုံး (အလုပ်) ဖွင့်ရက် (စက်တင်္ဘာ၂၀)မှာ စာချုပ်ပြည့်တယ်လို့ ဥပဒေအရ မှတ်ယူရပြီး ၊ လုပ်ခလစာနှင့် လုပ်သက်ဆုကြေးတို့ကိုပါ အဲသည်နေ့မှာ တစ်ပါတည်း ရရှိခံစားခွင့်ရှိပါတယ် ။
ပိတ်ရက်ခံနေတဲ့အတွက် ၁နှစ် ပြည့်ဖို့လိုနေတဲ့ ရက်ကို အစားပြန်ဆင်းပေးဖို့ လိုမည်မဟုတ်ပါ ။
ပိတ်ရက် (စနေ ၊ တနင်္ဂနွေနှင့် နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းဝင်ပိတ်ရက်များ) အတွင်း ဗီဇာကုန်ရင် ပထမဆုံး ရုံးပြန်ဖွင့်သည့်ရက်မှာ ဗီဇာသက်တမ်းတိုးလို့ ရပါတယ် ။ ဗီဇာကုန်ရက် ကျော်နေသော်လည်း အိုဗာစတေး ဖြစ်မသွားပါ ။ အခု လာမယ့် ချူးဆောက်ပိတ်ရက်မှာ ဗီဇာကုန်မယ့်သူများအဖို့တော့ စက်တင်္ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှာမှ ဗီဇာတိုးလို့ရသပေါ့ခင်ဗျာ ။
အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 10:20 AM0comments
Labels: သတင်းဖတ်စာ, အလုပ်ခွင်ရေးရာ, ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်း, ဆောင်းပါး
အခွင့်အရေးတွေ များများရဖို့ ဆိုလျင်………
မနေ့က အလုပ်လုပ်ကောင်းတုန်း ၊ ညီငယ်တစ်ယောင်ဆီက ဖုန်းဝင်လာပါတယ် ။
ဖုန်းနံပါတ်ကြည့်လိုက်တော့ နံပါတ်က အသစ် ၊ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးသေးတဲ့နံပါတ် ။
010 4966 0626
သိလိုက်ပြီ ။ ပြဿနာတစ်ခုတော့ တက်ပြန်ပြီလို့ ။ သူပြောတာ နားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ ၊ သူဌေးက
အလုပ်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်တော့မှာမို့ ၊ စာချုပ်အသစ် လက်မှတ်ထိုးဖို့ လာပြောသတဲ့ ။ ဒီတော့ ဒီစက်ရုံကထွက်တော့မှာမို့ ၊ လက်မှတ်မထိုးတော့ဘူးလို့ သူ ငြင်းလွတ်လိုက်သတဲ့ ။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်ပဲ ၊ ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်မဆိုးဖူးခဲ့တဲ့ သူဌေးက ၊ မင်းလက်မှတ်မထိုးရင် အခုထွက်တော့ဆိုပြီး ၊ သူ့ကိုမောင်းထုတ်သတဲ့ ၊ ပထမတော့ မထွက်ဘူး ၊ စာချုပ်ကုန်တော့မှာပဲ ၊ စာချုပ်ကုန်တဲ့အထိ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ပေခံနေသေးသတဲ့ ၊ ဒါပေမယ့် သူဌေးက သူ့ကို ကိုင်ပြီး ၊ ဆွဲထုတ်သတဲ့ ။ နောက် အခန်းထဲက သူ့ပစ္စည်းတွေကိုလဲ ဆွဲထုတ်ယူလာသတဲ့ ။ ပစ္စည်းတွေ နောက်မှလာယူမယ် ၊ လူချည်းပဲ သွားမယ် ၊ သူဌေး ဒီလိုလုပ်လို့ မရဘူး ။ အခု အလုပ်သမားရုံး (နိုဒုံဘု ၊ ဂျိဝေါန်ဆင်ထော်) သွားမယ်ဆိုတော့ ။ ဘယ်သွားသွား ပစ္စည်းတွေပါ တစ်ခါတည်းယူသွားဆိုပြီး ၊ ပြောသတဲ့ ။ နောက်ပစ္စည်းတွေ ဒီအတိုင်းထားခဲ့ပြီး ၊ သူ့ နိုင်ငံခြားသားကတ်လေး ယူပြီး ၊ အလုပ်သမားကူညီရေးဆင်တာ တစ်ခုဆီ သွားခဲ့သတဲ့ ။ အဲဒီဆင်တာက ပြောပေမယ့် ၊ သူဌေးက လက်မခံတော့ ၊ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရုံးကို သွားဖို့ပြောသတဲ့ ။
အလုပ်သမားရုံးကို သွားဖို့ ကိုရီးယားစကားအခက်အခဲ ရှိနေတော့ ၊ မပိုးပိုး (အန်ဆန် ၊ ဘာသာပြန်ဆင်တာ) ဆီသွားခဲ့သတဲ့ ။ မပိုးပိုးကလည်း ခွင့်ယူထားတော့ ၊ မတွေ့ခဲ့ရဘူးတဲ့ ။
အခု သူငယ်ချင်းအခန်းရောက်နေသတဲ့ ။ သူငယ်ချင်းကပြောလို့ အခု အစ်ကိုယ့်ဆီ ဆက်ပြီး ၊ အကူအညီတောင်းရတာပါတဲ့ ။
ကျနော်ကလည်း ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ ။ မသန့်ဆီ ဆက်ပြီးပြီလား ။ (မဆက်ရသေးဘူးအစ်ကို)
ညီလေး ၊ မင်း ကိုစိုးမိုးသူကို သိသလား ။ (မသိဘူးအစ်ကို)
အေးကွာ ၊ သူတို့ဆီ ဆက်ကြည့်လိုက်ဦး ၊ သူတို့ ဖုန်းနံပါတ်တွေ ၊ မက်ဆေ့ထိုးပေးလိုက်မယ် ။
မထူးရင်ထပ်ပြော ၊ အကူအညီလိုတာပြောဆိုတော့ ။ မနက်ဖြန် ကျနော် နိုဒုံဘု (အလုပ်သမားရုံး) သွားချင်တယ်အစ်ကို ၊ ကျနော် သူတို့ပြောတာ နားမလည်ရင် ကျနော့်ကို ကူညီပါအုံး ၊ ကျနော်ဖုန်းခေါ်ရင် ကိုင်ပေးပါနော် အစ်ကို ။
အေး ၊ အေး ရတယ် ။ ကြိုက်တဲ့အချိန် ခေါ် ။ မကိုင်ရင် မအားလို့ ၊ မကြားလို့ တစ်ခုခု ဖြစ်မယ် ။ ဆက်တိုက်သာခေါ် ၊ အားမနာနဲ့ ဆိုပြီး ၊ ဖြတ်လိုက်ရပါတယ် ။
ဒီညီငယ်နေရာမှာ ၊ ကိုရီးယားတစ်ယောက်သာ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလျင် ၊ အဲဒီသူဌေး ၊ ဒီလိုလုပ်ရဲပါ့မလား ။
အဲဒီလိုမလုပ်တာ သေခြာတယ် ။
အဲဒီလိုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်လို့ ၊ သူကလည်း ကိုရီးယားသားတွေကို မခိုင်းတာဖြစ်မှာပေါ့နော် ။
ကိုရီးယားအလုပ်သမား ၊ မြန်မာအလုပ်သမား ၊ တရုတ်အလုပ်သမား စသည်ဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုရဘူး လို့ ဥပဒေက ဆိုထားတယ် ။ ဒီဥပဒေကို အလုပ်ရှင်က မသိတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ။ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး လုပ်တာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ။
တကယ်တမ်းပြောကြစို့ ဆို ၊ (အဲဒီသူဌေး) သူဒီလိုလုပ်ရင် သူ့မှာ ဘာမှ နစ်နာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာ သူယုံကြည်လို့ အဲသလို လုပ်လိုက်တာပဲလို့ ကျနော်ယုံကြည်တယ် ။
အဲ ဒီလို ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာမျိုးတွေ ။ နစ်နာမှုအမျိုးမျိုးတွေ မရှိရအောင် ၊ ကျနော်တို့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ ကိုရီးယားအလုပ်သမားတွေနှင့်အတူတူ ၊ တူညီတဲ့ အခွင့်အရေးရှိတယ် ဆိုတာ ကျနော်တို့ သိနေဖို့လိုတယ် ။
ဘာတွေ ရှိလို့ ၊ ဘာတွေ သိဖို့ လိုသလဲဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ …………
ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမား ညီငယ် မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ ခင်ဗျား ၊
လာမယ့် တနင်္ဂနွေ ၊ မြန်မာအသင်း(ကိုရီးယား)က ကြီးမှူးပြီး ၊ ဘူချောန်းမြို့မှာကျင်းပမယ့် ၊ ပြဿနာတွေရှင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို တက်ဖြစ်အောင်တက်ကြဖို့ လိုမယ်လို့ ၊ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ ။
အခွင့်အရေးလိုချင်ရင် ၊ အခွင့်အရေးရှိပါလားဆိုတာ အရင်သိအောင်လုပ်ဖို့လိုမယ် ။
နောက်တော့ အခွင့်အရေးရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါလားဆိုတာ သိဖို့လိုမယ် ၊ အဲဒီသိမှု မသိမှုအပေါ်မူတည်ပြီး ၊ လူတွေ ကွဲပြားခြားနားနေကြပါရော့လား ၊ ဒီတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာများ များများရဖို့ဆိုလျင် သိမှုကို ချဲ့နိုင်သမျှ ချဲ့နေဖို့ လိုမယ်လို့ ယူဆကြောင်းပါခင်ဗျား ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 7:09 AM0comments
Labels: အယူအဆ, အလုပ်ခွင်ရေးရာ, ဆောင်းပါး, မောင်းသတင်း